Frontostriatal ရင့်ကျက်မှုသည်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များ၌သိလိုစိတ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းအားကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း (၂၀၁၁) - Your Brain On Porn
Frontostriatal ရငျ့မြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာတွေကို appetitive မှသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးပျက်ကွက် (2011) ခန့်မှန်း
J ကို Cogn neuroscience ။ 2011 စက်တင်ဘာ; 23 (9): 2123-34 ။ EPub 2010 စက်တင်ဘာ7။
Somerville LH, ယုန် T က, ကာဇီ BJ.
Developmental Psychobiology များအတွက် Sackler Institute မှ, Weill အတှကျကော်နဲလ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကောလိပ်, 1300 York မြို့ရိပ်သာလမ်း, Box ကို 140, နယူးယောက်, NY 10065, USA ။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေဆင်းရဲသားကိုတစ်သက်တာရလဒ်များ၏အလေးသာတိုးပွါးကြောင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းအချက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှထင် မြီးကောင်ပေါက်'' စွန့်စားရမှုအတွက်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သော sensitivity ဖြစ်သည် အလိုဆန္ဒ တွေကို, လုံလောက်သောကွိုးစားအားထုတစ်ခုနုစွမ်းရည်မှဆွေမျိုး သိမြင်မှု ထိန်းချုပ်မှု။ ကျနော်တို့ကွဲပြားနှင့်အတူ ventral striatal, dorsal striatal နှင့် prefrontal cortical ဒေသများအကြားအပြန်အလှန် characterizing ဖွငျ့ဤယူဆချက်ကိုစမ်းသပ် အလိုဆန္ဒ fMRI စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ကို အသုံးပြု. ဝန်။ ကလေးသူငယ်, ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသင်တန်းသားများကိုအတူသွားလာရင်း / အဘယ်သူမျှမ-go တာဝန်ဖျော်ဖြေ အလိုဆန္ဒ (ပျော်ရွှင်မျက်နှာများ) နှင့်ကြားနေ တွေကို (မျက်နှာများတည်ငြိမ်အောင်) ။ ထိခြင်း ထိန်းချုပ်မှု ကြားနေဖို့ တွေကို ဆယ်ကျော်သက်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့တစ် nonlinear လျှော့ချရေးပြသသော်လည်း, အသက်နှင့်အတူ linear တိုးတက်မှုပြသ ထိန်းချုပ်မှု သို့ အလိုဆန္ဒ တွေကို။ ဆယ်ကျော်သက်၌ဤစွမ်းဆောင်ရည်လျှော့သည့် ventral striatum အတွက်ပိုကောင်းလှုပ်ရှားမှုအားဖြင့် paralleled ခဲ့သည်။ Prefrontal cortical စုဆောင်းမှုခြုံငုံတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းနှင့်သွားလာရင်းစမ်းသပ်မှုတွေနှိုင်းယှဉ်ခြင်းမရှိ-go များအတွက်အသက်အရွယ်နှင့်အတူတစ်ဦး linear တုံ့ပြန်မှုပြသခဲ့သည်။ ဆက်သွယ်မှုတစ်ခု ventral ဖော်ထုတ်လေ့လာဆန်းစစ် frontostriatal သွားလာရင်းစမ်းသပ်မှုတွေနှိုင်းယှဉ်ခြင်းမရှိ-go စဉ်အတွင်းယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ gyrus နှင့် dorsal striatum အပါအဝင် circuit ကို။ စုဆောင်းမှုဆန်းစစ်ကြီးထွားဆယ်ကျော်သက်ပျော်ရွှင်ဘို့ကလေးများနှင့်လူကြီးများပိုမိုအကြား-ဘာသာရပ် ventral-dorsal striatal coactivation ဆွေမျိုးသွားလာရင်းစမ်းသပ်မှုတွေနှိုင်းယှဉ်ခြင်းမရှိ-go ခဲ့ကွောငျးပြသခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်၏ပုံကြီးချဲ့ ventral striatal ကိုယ်စားပြုမှု ဆက်စပ်. အ အလိုဆန္ဒ တွေကို in မြီးကောင်ပေါက် တစ်ဦးကြားခံမှဆွေမျိုး သိမြင်မှု ထိန်းချုပ်မှု တုန့်ပြန်။ ဆက်သွယ်မှုများနှင့် coactivity ဒေတာသည်ဤစနစ်များ differential ဖှံ့ဖွိုးတိုးဖြတ်ပြီး dorsal striatum ရဲ့အဆင့်မှာဆက်သွယ်ပြောဆိုအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဘက်လိုက်ဒီစနစ်အတွက်တုံ့ပြန်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းကြီးထွားအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအခြေခံတဦးတည်းဖြစ်နိုင်သမျှယန္တရားဖြစ်ပါတယ်။
ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူမြောက်မြားစွာနည်းလမ်းကလေးများနှင့်လူကြီးများတွင်တွေ့မြင်နေသှေးကွဲပြားခြားနားသည်။ ယင်းပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်အကြောင်းတရားများသေဆုံးမှု၏ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ဤရလဒ်များနှင့် ပတ်သက်. မြင့်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအမူအကျင့်အပေါ်အမေရိကန်ကျန်းမာရေးစာရင်းဇယားစဉ်းစားသည့်အခါဤအကွဲပြားခြားနားမှုအထူးထင်ရှားရှိပါတယ်။ epidemiological လေ့လာမှုများ (မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်, မတော်တဆသေခံခြင်းနှင့်အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်သိသိသာသာရောက်လာခြင်းဖြင့်သက်သေအတိုင်း, ဆယ်ကျော်သက်နှစ်တာကာလအတွင်းတိုးမြှင်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူသတင်းပို့Eaton, et al ။ , 2008) ။ ဒီအမူအကျင့်ပြောင်းကုန်ပြီအခြေခံကြောင်းသိမြင်မှုနှင့်ဇီဝယန္တရား၏အဖြေပိုကောင်းနားလည်မှုသည်ဤအန္တရာယ်များအပြုအမူတွေကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ရည်ရွယ်လျာထားသောကြားဝင်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေနိုင်သည်။
ကျနော်တို့မျှော်လင့်ထားသည့်ဆုလာဘ် (၏ချဉ်းကပ်မှုဆီသို့ဆယ်ကျော်သက်အပြုအမူနေကြပါတယ်စေခြင်းငှါ neurobiological ရငျ့၏ရှုထောင့် characterizing တစ်သီအိုရီမူဘောင်တီထွင်ခဲ့ကြCasey, Getz, & Galvan, 2008; ကာဇီ, ဂျုံးစ်, & Hare, 2008; Somerville & Casey, 2010) ။ အခြားသူများနှင့်ကိုက်ညီဒါကမော်ဒယ်, (Ernst, ထင်းရှူး, & Hardin, 2006; Steinberg, 2008) နှင့်တိရစ္ဆာန်နှင့်လူ့အတွက်ပင်ကိုယ်မူလအလုပ်အတွက် grounded, စိတ်ခွန်အားနိုးဝန်နှင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးကိုယ်စားပြုဦးနှောက် circuitry အကြားအပြန်အလှန်အပြုအမူအပေါ်စိတ်ခွန်အားနိုးနှင့်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ၏ဆွေမျိုးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအကြားတစ်ဦးမညီမမျှဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်အတူ, ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဖြတ်ပြီးသည် dynamically ကွဲပြားကြောင်းအဆိုတင်သွင်း။ ထိုကဲ့သို့သော ventral striatum အဖြစ်အလားအလာဆုလာဘ်တွေရဲ့အစာစားချင်စိတ်တန်ဖိုးကိုကိုယ်စားပြုအထူး dopamine ကြွယ်ဦးနှောက်ဒေသများ (Carlezon & ပညာရှိ, 1996; Pontieri, Tanda, Orzi, & DiChiara, 1996; ပညာရှိ 2004; သွပ်ရည်စိမ်, et al ။ , 2005; Haber & Knutson, 2009; Spicer, et al ။ , 2007) (အဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသောရငျ့၏ညွှန်ပြစေခြင်းငှါအရာမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းခိုင်မာတဲ့အချက်ပြကိုပြသသွပ်ရည်စိမ်, et al ။ , 2006; Geier, Terwilliger, Teslovich, Velanova, & Luna, 2010; ဗန် Leijenhorst, et al ။ , 2009) ။ ventrolateral frontostriatal ကွန်ရက်များ (အပါအဝင်စိတ်ခွန်အားနိုးနှင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များပေါင်းစပ်မှုအတွက်အရေးကြီးသောမတူဘဲ, ဦးနှောက် circuitryBalleine, Delgado, & Hikosaka, 2007; Delgado, Stenger, & Fiez, 2004; ရူဗျောဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့, et al ။ , 2006) (အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်နှစ်တာကာလအတွင်းလျော့နည်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ရင့်ကျက်ရှိနေဆဲGiedd, et al ။ , 1999; Luna, et al ။ , 2001) ။ ဤအမှုစနစ်များအပြန်အလှန်အခါ, ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များအားဖြင့်လျော့နည်း downregulation အတူ ventral striatum ၏အချက်ပြထိရောက်စွာထိန်းချုပ်စနစ်များအားဖြင့်အမှတ်ကိုဖြုတ်လိုက်ပါ left တိုးမြှင့်ချဉ်းကပ်မှုလှုံ့ဆျောမှုအချက်ပြ, နောက်ဆက်တွဲအပြုအမူအပေါ်တစ်ဦးပိုမိုအားကောင်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုပြုပြင်။
မကြာသေးမီ neurobiological သုတေသနအဓိကအားဒီစိတ်ကူးထောက်ခံထားပြီးသော်လည်း, ထိုသီအိုရီမော်ဒယ်များအသိပေးသက်သေအထောက်အထားအများစုကိုသီးခြားစီဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့သို့မဟုတ်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးစနစ်များကိုဖြစ်စေပစ်မှတ်ထားလျက်ရှိသည်။ တစ်ဦးကကလွဲရင်မက်လုံးပေးသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးစွမ်းရည် upregulate နိုငျပုံကိုသရုပ်ပြမကြာသေးမီအလုပ်ဖြစ်ပါသည် (Geier, et al ။ , 2010; Hardin, et al ။ , 2009), အရာအတွက်သင်တန်းသားများကိုမှန်ကန်စွာတစ် ဦး မဟုတ်ရင်ကြားနေအပြုအမူကိုဖိနှိပ်ဘို့ဆုချခဲ့သည်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များ၏ကြားနေသို့မဟုတ်အပြုသဘောဆောင်သည့်မျက်နှာများအပေါ်ထိရောက်သောတုံ့ပြန်မှုကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းအားဖြင့်၊ ဤဒီဇိုင်းသည်ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်များ၏နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်သွေးဆောင်မှုကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်စွမ်းကိုအသိပေးသည့်သက်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုပုံစံဖြစ်သည်။
ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာတော့ကျွန်တော်တစ်ဦးသွားလာရင်း nogo ပါရာဒိုင်း (ဥပမာအသုံးပြုသွားမည် Durston, Davidson, et al ။ , 2003; Hare, Tottenham, Davidson, Glover, & Casey, 2005) အနိမ့်အစာစားချင်စိတ်တန်ဖိုးကိုတစ်ထိန်းချုပ်ခွအေနအေကိုယ်စားပြုအစာစားချင်စိတ်တွေကိုနှင့် nonthreatening အေးဆေးတည်ငြိမ်မျက်နှာများကိုယ်စားပြုပျော်ရွှင်မျက်နှာများနှင့်အတူ။ ပျော်ရွှင်မျက်နှာများအနေနဲ့အစာစားချင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုကိုကိုယ်စားပြုသောအခိုင်အမာအရေးဆိုမှု (button ကိုစာနယ်ဇင်းကနေတဆင့်) ပျော်ရွှင်လှုံ့ဆော်မှုချဉ်းကပ်တုံ့ပြန် latency (လျော့နည်းစိတ်ခံစားမှုအေးဆေးတည်ငြိမ်အသုံးအနှုန်းတွေမှဆွေမျိုး speeded ဖြစ်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းအချက်အလက်ပေါ်အခြေခံသည်ယုန် et al ။ , 2005,) ရလဒ်များကိုကြည့်ပါ။ ဤသည်ပါရာဒိုင်းဟာပါဝင်သူအဆိုပါပါဝင်သူဒီတုံ့ပြန်မှုဖိနှိပ်သငျ့သညျအရာအတွက်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုနှင့်အခြားသူများကိုတုံ့ပြန်ရန်ညွှန်ကြားထားသောစမ်းသပ်မှုတွေပါရှိသည်။ ကလေးသူငယ်, ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသင်တန်းသားများကိုတစ်ဦးကြိုတင်အစီရင်ခံစာနှင့်အတူတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထပ်နမူနာအနေဖြင့် (ယုန် et al ။ , 2008) အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့စဉ်အတွင်းတာဝန်ပြီးစီး။ တစ်ခုချင်းစီကိုနှိုးဆွအမျိုးအစားမှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုဖော်ထုတ်နှင့် fMRI ယခင်ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာဖြတ်ပြီးသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ circuitry (frontostriatal circuitry) နှင့် (ventral striatum) ဆုချမှအထိခိုက်မခံဦးနှောက်ဧရိယာများအပေါ်အာရုံစိုက်လေ့လာဆန်းစစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အထူးသကျနော်တို့ကဤစနစ်များအကြားအပြန်အလှန်သို့နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ထဲကအကူးအပြောင်းကာလအတွင်းအပါအဝင်အသက်အရွယ်မရွေးကျယ်ပြန့်အကွာအဝေး, ဖြတ်ပြီးအဓိက, အစာစားချင်စိတ်တွေကိုမှသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးဆုံးရှုံးမှုခန့်မှန်းဘယ်လောက်အာရုံစိုက်။
အသက် ၆ နှစ်မှ ၂၉ နှစ်ကြားရှိသူ ၈၃ ဦး ကိုဤစမ်းသပ်မှုအတွက်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ ပါဝင်သူ (၇) ဦး မှအချက်အလက်များသည်အခြေအနေတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောအခြေအနေများတွင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်မလုံလောက်သောမှန်ကန်သောစမ်းသပ်မှုများအတွက်ဖယ်ထုတ်ခံခဲ့ရသည်။ (စမ်းသပ်မှုအားလုံးပြီးစီးခြင်း၊ ခြုံငုံမှုနည်းပါးခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်တုန့်ပြန်မှုမရှိခြင်း) ။ ပါ ၀ င်သူ ၁၂ ဦး မှအချက်အလက်များကိုခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ဖယ်ထုတ်ထားသည်။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများကြောင့်နောက်ထပ်သင်တန်းသားနှစ် ဦး ကိုလေ့လာဆန်းစစ်မှုများတွင်အသုံးဝင်သောဘာသာရပ် ၆၂ ခု (အမျိုးသမီး ၃၀) ကိုချန်ထားခဲ့သည်။ ဤတာ ၀ န်တွင်ရရှိသောအချက်အလက်များ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုသီးခြားအစီရင်ခံစာတစ်ခုတွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ယုန် et al ။ , 2008) (စမ်းသပ် Task ကိုကြည့်ပါ) ဒီနေရာမှာအပေါ်အစီရင်ခံမစမ်းသပ်အခြေအနေပေါ်အာရုံစူးစိုက်။ ယင်းမှဆွေမျိုး ယုန် et al ။ (2008) နမူနာ, ပစ္စုပ္ပန်နမူနာပါဝင်ပါသည်ဎ = တူညီသောသင်တန်းသားများ၏ 57 လည်းပါဝင်သည်ဎ =5နောက်ထပ်ကလေးကသင်တန်းသားများကို။
အဆိုပါဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာနမူနာအကြောင်းကိုလူဦးရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များအတွက်တွေ့ စားပွဲတင် 1။ သင်တန်းသားများကိုအဘယ်သူမျှမအာရုံကြောသို့မဟုတ်စိတ်ရောဂါနာမကျန်းအစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့်အကျဉ်းစိစစ် module အတွက်စိတ်ဆေးဝါးများမရှိပါအသုံးပြုမှု, Self-အစီရင်ခံကျန်းမာရေးပြဿနာများ, ဆေးဝါးအသုံးပြုမှုနှင့်အတိတ် diagnoses နှင့်စိတ်ရောဂါရောဂါကုသမှုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့အန္တရာယ်များကိုအကဲဖြတ်။ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုမီ, ရှိသမျှဘာသာရပ်များ Weill အတှကျကော်နဲလ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကောလိပ်များ၏ Institutional ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ကအတည်ပြုအကြောင်းကြားရေးသားထားသောသဘောတူညီချက် (မိဘသဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်ဘာသာရပ်အစွမ်း) သည်။
စမ်းသပ် Task ကို
သင်တန်းသားများကို (ကသွားလာရင်း-nogo တာဝန်ပြီးစီးယုန်, et al ။ , 2005; ယုန်, et al ။ , 2008) လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်အမှုဆောင်, ကြောက်မက်ဘွယ်သောပျော်ရွှင်များနှင့်အေးဆေးမျက်နှာအသုံးအနှုန်းတွေအတူ။ လက်ရှိအစီရင်ခံစာ (ကကြိုတင်အစီရင်ခံစာ၏အာရုံစူးစိုက်ခဲ့သောပျြောရှငျနှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်အခြေအနေများအပေါ်အာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်အုပ်စုတစ်စုကနေကွောကျရှံ့သောအခွအေနေလေ့လာဆန်းစစ် omitsယုန် et al ။ , 2008) ။ fMRI တစ်ခုတည်းပြေးစဉ်အတွင်းစကားဝိုင်းအမျိုးအစားနှစ်မျိုးကိုတင်ပြခဲ့သည်။ တစ်ခုမှာ `သွား '(ဆိုလိုသည်၊ ပစ်မှတ်) လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပါဝင်သူများအားခလုတ်နှိပ်ရန်ညွှန်ကြားထားပြီးအခြားအသုံးအနှုန်းမှာ` nogo' (ဆိုလိုသည်မှာမပစ်မှတ်) လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်။ အရာများအတွက်သင်တန်းသားများကိုခလုတ်ကိုဖိနှိမ်သင့်တယ်။ အသုံးအနှုန်းတွေအားလုံးကိုပေါင်းစပ်ပြီးပစ်မှတ်ရောပစ်မှတ်ရောနှစ်ခုလုံးကိုသုံးပြီးရလဒ် (၂) (response: go, nogo) မှ ၃ (စိတ်လှုပ်ရှားမှု - ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ အေးဆေးခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်း) စက်ရုံဒီဇိုင်းကိုရရှိခဲ့သည်။ တစ် ဦး ချင်းစီပြေးမစတင်မှီ, မျက်နှာပြင်ပေါ်လာသည်မည်သည့်အသုံးအနှုန်းသည်ပစ်မှတ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်ဟုဖော်ပြပြီးသင်တန်းသားများကိုထိုစကားရပ်ကိုတုံ့ပြန်ရန်နှင့်အခြားမည်သည့်စကားရပ်ကိုမဆိုတုံ့ပြန်ရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုတတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်တုံ့ပြန်ရန်ဒါပေမယ့်အမှားများကိုရှောင်ရှားရန်ကြိုးစားရန်လည်းညွှန်ကြားခဲ့သည်။
လှုံ့ဆော်မှု (မျက်နှာအသုံးအနှုန်းတွေ၏ NimStim အစုံကနေထူးခြားတဲ့အထောက်အထားတွေကို၏မင်္ဂလာကြောက်နဲ့အေးဆေးတည်ငြိမ်မျက်နှာများပါဝင်သည်စပါး, et al ။ , 2009) ။ ကြိုတင်အလုပ်ကြားနေမျက်နှာများဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလူဦးရေအတွက်အနုတ်လက္ခဏာအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်စေမည့်မည်နိုငျကွောငျးဖျောပွခဲ့လပွေီအေးဆေးတည်ငြိမ်မျက်နှာများ (ကြားနေမျက်နှာများ၏ရစေရန်သာယာသောဗားရှင်း) (အသုံးပြုခဲ့ကြသည်စုစုပေါင်း & Ballif, 1991; Herba & Phillips, 2004; သောမတ်စ်, et al ။ , 2001) ။ အဆိုပါလုပ်ငန်းတာဝန်ဟာ IFIS-SA စနစ် (fMRI ဖုန်းများအတွက်ကော်ပိုရေးရှင်း, Waukesha, WI) နဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ overhead အရည် crystal display (LCD ကို) panel ကိုအပေါ်ဘာသာရပ်များအားဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်သည်, EPrime software ကိုသုံးပြီးတင်ဆက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ IFIS စနစ်ဖြင့်ဘက်ပေါင်းစုံ EPrime ဆော့ဖျဝဲ, ခလုတ်ကိုတုံ့ပြန်မှုများနှင့်တုံ့ပြန်မှုကြိမ် logged ။
task ကို parameters တွေကို
ဒေတာကို nogo ခြောက်လအလုပ်လုပ်တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏တစ်ဦးချင်းစီပေါင်းစပ်ကိုယ်စားပြုပြေး (ပျော်ရွှင်, အေးဆေးတည်ငြိမ်ကြောက်ရွံ့ခြင်း) နှင့်တုန့်ပြန် (သို့သွားသည့်အတွက်ဝယ်ယူကြသည် ဟူ. ၎င်း, ပုံ 1) အလျင်မြန်သောဖြစ်ရပ်-related ဒီဇိုင်းကိုသုံးနိုင်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ်သည်, တစ်ဦးမျက်နှာတစ်ဦး fixation crosshair ကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းသင်တန်းသားများကိုငြိမ်ဝပ်စွာနေတော်မူသောကာလအတွင်းကြာချိန်အတွက်စက္ကန့် 500 မှ2ကနေအထိတစ်ဦး Jitter intertrial ကြားကာလ (14.5 စက္ကန့်ကိုဆိုလိုတာ) ကနောက်တော်သို့လိုက် 5.2 မီလီစက္ကန်အဘို့ထင်ရှား။ , 48 စမ်းသပ်မှုတွေ၏တစ်ဦးစုစုပေါင်း Pseudorandom အမိန့် (36 သွားပါ, 12 nogo) တွင်ပြေးနှုန်းတင်ပြခဲ့ကြသည်။ စုစုပေါင်း 24 nogo စမ်းသပ်မှုတွေနဲ့ 72 စမ်းသပ်မှုတွေအသီးအသီးစကားရပ်အမျိုးအစားများအတွက်ဝယ်ယူခဲ့ကြသည်သွားပါ။
တစ် ဦး fMRI ပြေးအတွင်းစမ်းသပ်မှုလေးခု၏သိထား။ ဤဥပမာတွင်အေးဆေးတည်ငြိမ်သောမျက်နှာများသည်ပစ်မှတ်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ပါဝင်သူများသည်ခလုတ်တစ်ခုကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် `သွားသင့်သည်။ ပျော်ရွှင်သောမျက်နှာများမှာ nontarget (`nogo) လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ပါဝင်သူများကခလုတ်ကိုနှိပ်ရမည်။ ...
သင်တန်းသားများကိုတစ်ဦး quadrature ခေါင်းကိုကွိုင်နှင့်အတူတစ် General Electric Signa 3.0T fMRI စကင်နာ (General Electric ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစနစ်များ, Milwaukee, WI) နဲ့ scan ဖတ်ခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးက high-resolution, T1 ချိန်ခန္ဓာဗေဒစကင်ကို gradient ကို sequence ကို ([SPGR] 256 × 256 In-လေယာဉ် Resolution, အမြင် 240-မီလီမီတာလယ်ကွင်း [FOV] 124 × 1.5-မီလီမီတာ axial ချပ်) တို့ကိုလုယူ, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး 3D သံလိုက်လျင်မြန်စွာရှာမှီးကိုပြင်ဆင် gradient ကိုပဲ့တင်သံ sequence ကို ([MPRAGE] 256 × 256 In-လေယာဉ် Resolution, 240-မီလီမီတာ FOV; 124 × 1.5-မီလီမီတာ sagittal ချပ်) Talairach ဇယားကွက်အာကာသမှအချက်အလက်များ၏အသွင်ပြောင်းနှင့်ဒေသခံများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအတွက်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ sequence ကိုနှင့်ထွက်တစ်ဦးကလိမ် (ဂလိုဗာ & Thomason, 2004), ပဲ့တင်သံအချိန် = 2500, FOV = 30 မီလီမီတာ, Flip ထောင့် = 200, 90,0× 64 matrix) skip (အထပ်ထပ်အချိန် = 64ms အလုပ်လုပ်တဲ့ data တွေကိုဆည်းပူးဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ သုံးဆယ့်လေး 4-မီလီမီတာအထူ Coronal ချပ်ဟာ occipital ပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏ posterior ဘို့ မှလွဲ. တစ်ခုလုံးကိုဦးနှောက်ကိုဖုံးအုပ်ထား 3.125 × 3.125 မီလီမီတာတစ် resolution ကို TR နှုန်းဝယ်ယူခဲ့ကြသည်။
အမူအကျင့် data တွေကိုထိခိုက် (မှန်ကန်သောတုံ့ပြန်မှု) တွက်ချက်ခြင်းဖြင့်တိကျမှန်ကန်မှုအဘို့ဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်, (တုန့်ပြန်၏မမှန်ကန်ကြောင်းမရှိခြင်း) လက်လွတ်, မှန်ကန်သောငြင်းပယ်ခံရ (တုန့်ပြန်၏မှန်ကန်သောအခွန်ရှောင်), မမှန်သောနှိုးဆော်သံပျော်ရွှင်အေးဆေးတည်ငြိမ်အခြေအနေများအဘို့ (မမှန်ကန်ကြောင်းတုန့်ပြန်) နှုန်းထားများ။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရည်ရွယ်ချက်များအဘို့, သင်တန်းသားများကိုဆယ်ကျော်သက် (6-12 အသက်) နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ (13 နှစ်သို့မဟုတ်အထက်) လူမျိုးကွဲ, (17-18 အသက်) ကလေးသည်သို့အုပ်စုဖွဲ့ခဲ့ကြသည်။
fMRI အချက်အလက်များ၏ analysis
FMRI data တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Functional Neuroimages (AFNI) ဆော့ဖ်ဝဲအားသုံးသပ်ခြင်း (အတွင်းဖျော်ဖြေခဲ့သည်ကော့, 1996) ။ ပါဝင်မှုတစ်ခုစီ၏မြင့်မားသော resolution ခန္ဓာဗေဒစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုနှင့်အတူမှတ်ပုံတင်၊ အချက်ပြပြောင်းလဲမှုယူနစ်မှရာခိုင်နှုန်းတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အကျယ်ဝက်ဝက်တွင် ၆ မီလီမီတာအပြည့်အကျယ်ရှိချောမွေ့မှုရှိခြင်း (FWHM) ) Gaussian kernel ကို။
တစ်ဦးချင်းစီပါဝင်သူများအတွက်အထွေထွေ linear မော်ဒယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအကျိုးစီးပွားလုပ်ငန်းတာဝန် regressors (ငြိမ်သက်-go, အေးဆေးတည်ငြိမ်-nogo မင်္ဂလာ-go, ပျော်ရွှင်-nogo ကြောက်ရွံ့-go, ကွောကျမကျ nogo, အမှားအယွင်းများ) ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်အလုပ်တစ်ခုကိုသက်ရောက်မှုတို့၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများမှဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်နှင့်အတူ convolved တစ်ဦး gamma-အပြောင်းအလဲတွေဟာ hemodynamic တုံ့ပြန်မှု function ကိုနှင့် Non-အကျိုးစီးပွား (ရွေ့လျားမှု parameters တွေကို, linear နှင့်တစ်ဦးချင်းစီပြေးဘို့ quadratic လမ်းကြောင်းသစ်) ၏ covariates ။ ပြည့်စုံသည်, စမ်းသပ်မှုတွေတာဝန် regressors (က canonical gamma-အပြောင်းအလဲတွေဟာ hemodynamic တုံ့ပြန်မှု function ကိုအတူ convolved) အဖြစ်လုပ်ပါတယ်ခဲ့ကြသည်ပေမယ့်နောက်ထပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြသည်မဟုတ်စိုးရိမ်နေကြသည်။ အလုပ်တခုကိုသက်ရောက်မှုကိုယ်စားပြု parameter ခန့်မှန်းချက် (β) မြေပုံထို့နောက်၏စံကိုသြဒိနိတ်အာကာသသို့အသွင်ပြောင်းခဲ့သည် Talairach နှင့် Tournoux (1988) တစ်ခုချင်းစီကိုဘာသာရပ်ရဲ့မြင့်မားတဲ့ resolution ကိုခန္ဓာဗေဒစကင်၏အသွင်ပြောင်းကနေရရှိခဲ့သည့်အတိုင် parameters တွေကိုလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်။ Talairach အသွင်ပြောင်း parameter သည်ခန့်မှန်းမြေပုံ3×3× 3mm ၏ resolution ကိုမှ resampled ခဲ့ကြသည်အသွင်ပြောင်း။
ကျပန်းသက်ရောက်မှုအုပ်စုတစ်စုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းနောက်ဆက်တွဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်အကျိုးစီးပွား (ROIs) ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ဒေသများသိရှိနိုင်ဖို့ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ အထူးပျြောရှငျ-go အခြေအနေများ, ပျော်ရွှင်-nogo, အေးဆေးတည်ငြိမ်- သွား. , အေးဆေးတည်ငြိမ်-nogo (အတွင်း-ဘာသာရပ်များ: ပျော်ရွှင်အေးဆေး) စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏အကြောင်းရင်းများနှင့်အတူတစ်2×2×3အုပ်စုတစ်စု linear ရောသက်ရောက်မှုမော်ဒယ်မှသယ်ဆောင်ခဲ့ကြ, တုန့်ပြန် ( ) nogo, သွား. , အသက်အရွယ် (အကြား-ဘာသာရပ်များ: ဘာသာရပ်များ-အတွင်းကလေးဆယ်ကျော်သက်, အရွယ်ရောက်ပြီးသူ) ။ differential ညာဘက်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ gyrus (x = 32, y က = 23, z = 3) အပါအဝင်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးတောင်းဆိုချက်တွေတစ် function ကိုအဖြစ်စေ့စပ်တုံ့ပြန်မှုမြေပုံဖော်ထုတ်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဒေသများ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုကြောင့် modulated တုံ့ပြန်ချက် (x = -4, y က = 11, z = -9) ကို ventral striatum အတွက်စပျစ်သီးပြွတ်အပါအဝင်အသက်အရွယ်မြေပုံ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှာဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။
AFNI အတွင်းရှိ Alphasim ပရိုဂရမ်တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော Monte Carlo ၏ပုံရိပ်ပြသည့် p-value / cluster အရွယ်အစားပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့် alpha <0.05 ကိုထိန်းသိမ်းရန်နှိုင်းယှဉ်ချက်များစွာအတွက်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာသိသာထင်ရှားမှုရှိသည့်ပုံရိပ်ဆိုင်ရာသိသာထင်ရှားသောပုံရိပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်တွေ့ရှိချက်များ တစ်ခုလုံး - ဦး နှောက်တံခါးခုံမှချွင်းချက်တစ်ခုမှာအသက်အရွယ်သက်ရောက်မှုကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြစ်သည်။ လှုံ့ဆော်မှုထိန်းချုပ်မှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် striatum ၏အခန်းကဏ္ကိုပေးသော (Vaidya et al ။ , 1998; ကာဇီ et al ။ , 2000; Luna et al ။ , 2001; Durston, သောမတ်စ်, ယန်, et al ။ , 2002, သွပ်ရည်စိမ် et al ။ , 2006; Somerville & Casey, 2010) ကတစ်ဦးအဖြစ်ဆက်ဆံခဲ့သည် တစ်ဦး အသက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏ voxelwise ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်အကျိုးစီးပွားဒေသ။ အထူးသ, အသက်သက်ရောက်မှု p <0.05, striatum ရှာဖွေရေးအသံအတိုးအကျယ် (1,060 voxels) အပေါ်အခြေခံပြီးလျှောက်ထား p <0.05, dorsal နှင့် ventral striatum အတွက် voxels ပါဝင်သောအားလုံးပါဝင်နိုင်ခန္ဓာဗေဒမျက်နှာဖုံးအတွင်းရှာဖွေခဲ့သည်။ ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုအဘို့, ငါတို့လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်တစ်လျှောက်လုံး p <XNUMX သေးငယ်တဲ့အသံအတိုးအကျယ် (svc) တညျ့အဖြစ်အသက်အကျိုးသက်ရောက်မှုအချက်အလက်များ၏တံခါးကိုရည်ညွှန်းသည်။
အကျိုးစီးပွားများသောအသီးအသီးတဆယ်4×3×3voxels ်, အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောထိပ်အကြောင်းကိုဗဟိုပြုတဲ့ 3mm အချင်းဝက်နှင့်အတူနယ်ပယ်အဖြစ်ဖန်တီးထားကြသည်။ parameter ခန့်မှန်းချက်အသီးအသီးပါဝင်သူနှင့်ရွယ်များအတွက်4အခြေအနေများ (ပျော်ရွှင်-go, ပျော်ရွှင်-nogo, အေးဆေးတည်ငြိမ်-go, အေးဆေးတည်ငြိမ်-nogo) အတွက်ထုတ်ယူခဲ့ကြခြင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းတင်သွင်းခဲ့ကြသည်သက်ရောက်မှုများ directionality ဆုံးဖြတ်ရန်လေ့လာဆန်းစစ်။ ကလေးဆယ်ကျော်သက်, အရွယ်ရောက်ပြီးသူ:2(အသက်×:2(go, nogo တာဝန်) ×: တုံ့ပြန်မှု, စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု (အရွယ်သတ်မှတ်ခဲ့သောအတူ voxelwise ဆနျ့ကငျြဘ၏လွတ်လပ်သော)3(အေးဆေးတည်ငြိမ်မင်္ဂလာစိတ်လှုပ်ရှားမှု) သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည် ) ANOVAs ။ အော့ဖ်လိုင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း SPSS စာရင်းအင်း 17.0 software ကို (SPSS, ချီကာဂို, IL) တွင်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။
သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုဘာသာရပ်များ '' ဆိုလိုမှားယွင်းသောနှိုးဆော်သံနှုန်းထားများဆန့်ကျင် bivariate ဆက်စပ်မှုမှ parameter သည်ခန့်မှန်းချက်တင်ပြခြင်းဖြင့်စွမ်းဆောင်ရည်မော်ဂျူများအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ သိပ္ပံနည်းကျစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆက်စပ်မှုနှင့်အတူ လိုက်၍ လေ့လာမှုပြုသည်မှာအသက်အရွယ်ကိုထိန်းချုပ်သောအခါစွမ်းဆောင်ရည်သက်ရောက်မှုများကျန်ရှိမနေကိုစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။ ပြောင်းပြန်, သိသာထင်ရှားသောအသက်အရွယ်သက်ရောက်မှုစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်ထိန်းချုပ်သည့်အခါအသက်အရွယ်ဆိုးကျိုးများသိသာကျန်ရစ်ခြင်းရှိမရှိခွဲခြားဆက်ဆံမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆက်စပ်မှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းနှင့်အတူတက်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။
သွားလာရင်း-nogo ပါရာဒိုင်းနှင့်အတူမတိုင်မီကအလုပ် (အောင်မြင်သောအပြုအမူတားစီးထောက်ပံ့အတွက် frontostriatal circuitry များအတွက်အခန်းကဏ္ဍထူထောင်ထားပါတယ်ကာဇီ et al ။ , 2000; Durston, သောမတ်စ်, ယန်, et al ။ , 2002; ယုန် et al ။ , 2005) ။ လက်ရှိ Datasets ၌ဤ circuitry ကိုသိရှိနိုင်ဖို့, တစ်ဦး psychophysiological အပြန်အလှန်ဆန်းစစ် (PPI) ဒေသဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအသက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ကွဲပြားမှုခန့်မှန်းထားတဲ့အဘို့အညာဘက်ကိုယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ gyrus အတွက်မျိုးစေ့ဒေသနှင့်အတူတာဝန်-based functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု differential မှအထိခိုက်မခံကွောငျးကိုအလုပ်ခန့်ခဲ့ပါတယ်။ အထူးသ, ဒီခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစမ်းသပ်မှုတွေသွားကြဖို့ဆွေမျိုးမှန်ကန်သော nogo စမ်းသပ်မှုတွေအဘို့အညာဘက် IFG နှင့်အတူ သာ. ကြီးမြတ်အလုပ်လုပ်တဲ့နားချင်းဆက်မှီဖေါ်ပြခြင်းကဦးနှောက်ဒေသများမှအထိခိုက်မခံခဲ့သည်။ အဆိုပါ PPI ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစံအပြောင်းအလဲနဲ့ခြေလှမ်းများကို အသုံးပြု. ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည် (Friston, et al ။ , 1997အမျိုးအနွယ်ကိုဒေသအတွင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ timecourse extracting အားဖြင့် (ညာ IFG ရွယ်က x = 32 အထက်တွင်ဖော်ပြထား), y က, ဆူညံသံများနှင့်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းသတင်းရင်းမြစ်ဖယ်ရှားခြင်းဟာအာရုံကြောအချက်ပြ deconvolving နှင့်မျှနှိုင်းယှဉ် go အတူ timecourse ဒေတာ convolving, 23, z = 3) = အလုပ်တစ်ခုကိုအချိန်နှင့်ကို Canon hemodynamic တုံ့ပြန်မှု function ကိုသွားပါ (အတွင်းသတ်မှတ်ထားသောအဖြစ် Gitelman, Penny, Ashburner, & Friston, 2003) ။ ပါဝင်သူအားလုံးအပါအ ၀ င်အုပ်စုလိုက်ရလဒ်များသည် p <0.05 သို့ရောက်ရှိခြင်း၊ ဦး နှောက်တစ်ခုလုံးအဆင့်တွင်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းများအတွက်တည့်မတ်ပေးခြင်း၊ စမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ရန်ထက် nogo တွင်မှန်ကန်သော IFG နှင့်ဆက်သွယ်မှုသိသိသာသာပိုမိုကောင်းမွန်ကြောင်းပြသထားသည့်အုပ်စုတစ်ခုတည်းကိုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ဤစပျစ်သီးပြွတ်သည်ညာဘက် IFG မှ dorsal striatum သို့ caudate အထိ medial နှင့် posterior ကိုတိုးချဲ့သည်။ အကျိုးစီးပွားတစ် dorsal striatum ဒေသ dorsal striatum (x = 4, y = 9, z = 13) ၏ခန္ဓာဗေဒနယ်နိမိတ်အတွင်းစပျစ်သီးပြွတ် Sub- အထွတ်အထိပ်နှင့်ပတ်သက်။ 6mm နယ်ပယ်ဗဟိုပြုနေဖြင့်ဆက်သွယ်မှုမြေပုံပေါ်တွင်အခြေခံပြီးထုတ်ပေးခဲ့သည်။
signal ပြောင်းလဲမှုတန်ဖိုးများကိုဒီရွယ်များမှထုတ်ယူနှင့် ventral striatum နှင့်ညာဘက် IFG နှင့်အတူအကြား-ဘာသာရပ် coactivation အဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ အထူးသယခင်ကဖော်ပြထားတဲ့ ROIs ထံမှ ventral striatal, dorsal striatal နှင့်ညာဘက် IFG signal ကိုပြောင်းလဲမှုကိုတန်ဖိုးများကိုပျြောရှငျ-nogo ပျော်ရွှင်-go ဆနျ့ကငျြဘနှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်ထုတ်ယူခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားတန်ဖိုးများထို့နောက်ကလေးဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူပါဝင်သူအုပ်စုများအတွင်းဆက်စပ်မှု bivariate ဘာသာရပ်များအကြားတင်သွင်းခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းတစ်ခုချင်းစီကိုအသက်အရွယ်အုပ်စုအတွင်းကဤဒေသများအကြားစမ်းသပ်မှုတွေသွားကြဖို့ nogo ဆွေမျိုးများအတွက်ဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီး coactivation ၏ဒီဂရီခွဲခြားသတ်မှတ်။ ဖော်ထုတ် coactivation တန်ဖိုးများရာတစျခုဒေသသက်ဝင်စေဖို့သဘောထားကိုသင်တန်းသားများကိုဖြတ်ပြီးအခြားဒေသတွင်း၌ activation ဟောကိန်းထုတ်ဖို့အတိုင်းအတာကိုကိုယ်စားပြုသည်။
အပိုဆောင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများအချက်အလက်များ၏အနိမ့်-Level ရှုထောင့်ကြောင့်မအစီရင်ခံကြောင်း verify လုပ်ဖို့ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။ အလုပ်တခုကိုစွမ်းဆောင်ရည်အသက်အရွယ်အုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်သကဲ့သို့, မှန်ကန်သောစမ်းသပ်မှုတွေ၏နံပါတ် GLM လေ့လာဆန်းစစ်ပထမဦးဆုံး-Level အတွင်းမှာကွဲပြား။ ထို့ကြောင့်, ပထမဦးဆုံး-Level GLMs ၏ဒုတိယ set ကိုမှန်ကန်စမ်းသပ်မှုတွေအရေအတွက်မှန်ကန်သောစမ်းသပ်မှုတွေ၏နိမ့်ဆုံးယုတ်အရေအတွက်နှင့်ကိုက်ညီရန်အခြေအနေများ (ပျော်ရွှင်-go, ပျော်ရွှင်-nogo, အေးဆေးတည်ငြိမ်-go, အေးဆေးတည်ငြိမ်-nogo) နှင့်သင်တန်းသားများကိုဖြတ်ပြီးပမာဏမှာတူညီခဲ့ကြသည်ရသောခန့်မှန်းခဲ့ကြသည် အားလုံးအသက်အရွယ်အုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီး (ကလေးများအတွက် nogo စမ်းသပ်မှုတွေငြိမ်သက်; ယုတ် = 17) ။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့အသစ် regressors ကျပန်းပါဝင်ဘို့ခွအေနအေနှုန်းဎ = 17 စမ်းသပ်မှုတွေကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ထုတ်ပေးခဲ့ကြသည်။ အားလုံးကတခြားစမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်နောက်ထပ်လေ့လာမဟုတ်ခဲ့သီးခြား regressors အဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ 17-ရုံးတင်စစ်ဆေး regressors ကနေတွေ့ရှိချက်ယခင်ကသတ်မှတ်ထားသော ROIs ထံမှထုတ်ယူပွားဘို့စမ်းသပ်ပြီးနှင့်ရလဒ်များအစီရင်ခံခဲ့သည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ခြုံငုံဒေတာအရည်အသွေးကိုအတောအတွင်းအဆိုပါ ventral striatum ၏တစ်ဦးချင်းစီအတွက် signal ကို-to-ဆူညံသံအချိုး (ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏), dorsal striatum, ညာ IFG ROIs နှင့်တပြင်လုံးကိုဦးနှောက်အတွက်တွက်ချက်ခြင်းဖြင့်အသက်အရွယ်အုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ Murphy နဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် (နေဖြင့်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏တန်ဖိုးများ, ပထမအဆင့်ယေဘုယျ linear မော်ဒယ်နှင့်ကျန်နေတဲ့ timeseries ၏စံသွေဖည်ခြင်းမှယုတ်အခြေခံခန့်မှန်းချက်များအကြားအချိုးအဖြစ်တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်မာဖီ et al ။ , 2007) နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင် neuroimaging အလုပ်များတွင်အသုံးပြု (ဂျွန်စ et al ။ , 2005) ။ SNR တန်ဖိုးများသည်မည်သည့်ဤဒေသများတွင်မဆို ဦး နှောက်တစ်ခုလုံးတွင်အသက်အုပ်စုများအလိုက်ကွဲပြားခြားနားမှုမရှိပါ (တစ်နည်းဆိုရသော် ANOVA (အသက် - ကလေး၊ ဆယ်ကျော်သက်၊ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ)၊ ROIs အားလုံး p ၏> 0.2; ဦး နှောက်တစ်ခုလုံး p> 0.3) ။ coactivation တွင် covariates များအနေဖြင့်အပြည့်အ ၀ ဦး နှောက် SNR တန်ဖိုးများကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအကြား - ဘာသာရပ်ကွဲပြားမှုသည်အသက်အုပ်စုတစ်ခုအတွင်းရှိအချက်အလက် sensitivity မတူကွဲပြားမှုကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖော်ပြခြင်းမဟုတ်ပါ (ရလဒ်များကိုကြည့်ပါ) ။
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလုပ်ငန်း၌ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအမှားနှစ်မျိုးကိုအာရုံစိုက်သည်။ လွဲချော်ခြင်း (သွားစစ်ဆေးစဉ်အတွင်းနှိပ်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်း) နှင့်မှားယွင်းသောနှိုးစက်များ (nogo trial ကာလအတွင်းမှားယွင်းစွာနှိပ်ခြင်း) ။ လွဲချော်သောနှုန်းထားများအတွက်2(3 နှစ် (စိတ်လှုပ်ရှားမှုပျော်ရွှင်မှုအေးဆေးတည်ငြိမ်မှု) ၏ရလဒ် (အသက်: ကလေး, ဆယ်ကျော်သက်, အရွယ်ရောက်ပြီးသူ) ရောထွေး ANOVA ၏ရလဒ်သည်စိတ်ခံစားမှု၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိစေသည် (F (1,59) = 15.44, p <0.001) ပျော်ရွှင်သောမျက်နှာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အေးဆေးတည်ငြိမ်သော (၅.၀% +/- ၀.၆) သာလွန်သောလွဲချော်မှုနှုန်း (5.0% +/- 0.6) ။ သို့သော်အသက်၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (F (2.6) = .0.4, p> 2,59) နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြန်အလှန်အားဖြင့်အသက် (F (24) = .0.7, p> 2,59) အတွက်စမ်းသပ်မှုများသည်သိသာထင်ရှားသောမဟုတ်ပါ စိတ်လှုပ်ရှားမှုအခြေအနေ (သို့) လွတ်နှုန်းထားများကိုအသက်အရွယ်အလိုက်ကွဲပြားစွာပြောင်းလဲခြင်းမပြုလုပ်ပါ။ပုံ 2, မီးခိုးရောင်လိုင်းကွက် [လွဲချော်မှု၏ပြောင်းပြန်]) နှုန်းထားများကိုနှိပ်ပါ။ ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများနှင့်ကလေးများ (အရွယ်ရောက်ပြီးသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကကလေးများအတွက်စမ်းသပ်မှုများကိုအေးဆေးတည်ငြိမ်ရန်အတွက်ပျော်ရွှင်မှုဆွေမျိုးများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောလွဲချော်မှုနှုန်းကိုအကဲဖြတ်သည့်လွတ်လပ်သောနမူနာ t-test များ၌ထူးခြားသောရလဒ်များမှ ထပ်မံ၍ ထောက်ခံခဲ့သည်။ အားလုံးသည် p> 0.5) ။
စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအားဖြင့်အမူအကျင့်စွမ်းဆောင်ရည်။ မီးခိုးရောင်လိုင်းစုစုပေါင်းသွားလာရင်းစမ်းသပ်မှုတွေထဲကမှန်ကန်သော hits ၏အချိုးအစားကိုကိုယ်စားပြု; အနက်ရောင်လိုင်းစုစုပေါင်းအဘယ်သူမျှမ-သွားလာရင်းစမ်းသပ်မှုတွေထဲကအယူမှားနှိုးစက်၏အချိုးအစားကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အဆိုပါက y ဝင်ရိုးများအတွက်တုံ့ပြန်မှုများ၏အချိုးအစားကိုကိုယ်စားပြု ...
မှားယွင်းသောနှိုးစက်နှုန်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသက်၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (F (2,59) = 12.57, p <0.001) နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပြန်အလှန်အားဖြင့်အသက် (F (2,59) = 3.59, p = 0.034; children: အေးဆေး 28.85) % +/− 4.4၊ ပျော်ရွှင်သော ၂၆.၇၁ +/- ၄.၂; ဆယ်ကျော်သက်များ - အေးဆေးမှု ၂၂.၁၊ +/- ၃.၄၊ ပျော်ရွှင်သော ၂၈.၄ +/– ၄.၃၊ လူကြီးများ - တည်ငြိမ်သော ၉.၃% +/- ၁.၅၊ ပျော်ရွှင်သော ၈.၉ +/- ၁.၇) ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှု (F (26.71) = 4.2, p> 22.1; ပုံ 2အနက်ရောင်လိုင်း) ။ အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်ပုံကိုလေ့လာရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသက်အရွယ်အုပ်စုများတွင်စမ်းသပ်မှုများငြိမ်သက်ရန်ပျော်ရွှင်သောဆွေမျိုးများအတွက်မှားယွင်းသောနှိုးစက်နှုန်းကိုနှိုင်းယှဉ်။ လွတ်လပ်သောနမူနာ t-tests များကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ဆယ်ကျော်သက်များသည်ကလေးများ (t (35) = 2.04, p = 0.049) နှင့်အရွယ်ရောက်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စမ်းသပ်မှုများအေးဆေးငြိမ်သက်ရန်ပျော်ရွှင်သောဆွေမျိုးများအတွက်သိသိသာသာပိုမိုမှားယွင်းသောနှိုးစက်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် (t (42) = 2.62, p = 0.012) ။ အခြားနည်းဖြင့်ပြသခဲ့သည်မှာဆယ်ကျော်သက်များကျူးလွန်သည့်မှားယွင်းသောနှိုးစက်များသည်ပျော်ရွှင်ဖွယ်အခြေအနေတွင်ရှိသည် (ပျော်ရွှင်မှုနှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်သော t (18) = 2.87, p = 0.01)၊ ကလေးများနှင့်လူကြီးများမှပြုလုပ်သောမှားယွင်းသောနှိုးစက်များသည်ပျော်ရွှင်စွာ၊ အမျိုးအစားများ (ပျော်ရွှင်မှုနှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်သော၊ ကလေးများ> p> 0.5၊ အရွယ်ရောက်သူများ> 0.9) ။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်သောစမ်းသပ်မှုများအတွက်မှားယွင်းသောနှိုးစက်များသည်အသက်အရွယ်ကြီးလာခြင်းနှင့်အတူတိုးတက်မှုပုံစံကိုပြသသည် (linear term F (1,59) = 22.3, p <0.001; quadratic term p> 0.4)၊ ပျော်ရွှင်သောစမ်းသပ်မှုများအတွက်၊ quadratic (inverted U) ) နှင့် linear ဆနျ့ကငျြဘတုံ့ပြန်အတွက်ကှဲလှဲ၏သိသာထင်ရှားသောအဘို့ကိုရှင်းပြခဲ့သည် (quadratic အသုံးအနှုန်းက F (1,59) = 6.52, p = 0.013; linear F ကို (1,59) = 14.31, p <0.001) ။
တုံ့ပြန်မှုအချိန်အချက်အလက်များအရပျော်ရွှင်သောမျက်နှာများသည်အေးဆေးတည်ငြိမ်သောမျက်နှာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မြန်သောတုံ့ပြန်မှုကိုလွယ်ကူသက်သာစေသည်ဟုဆိုလိုသည် (အေးဆေးတည်ငြိမ်စေရန်ပျော်ရွှင်ဆွေမျိုးအားအရှိန်ကိုဆိုလိုသည် - ၅၃.၅ ms +/- ၆၈ ms; F (53.5) = 68, p <1,59) ။ သီးခြားစမ်းသပ်ပြီးသည့်အခါဤသက်ရောက်မှုသည်အသက်အုပ်စုသုံးခုတွင်ထင်ရှားခဲ့သည် (p's = / <36.09) ။ ဖော်ပြပါတုံ့ပြန်မှုအချိန်အချက်အလက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - ကလေးများ (မီလီစက္ကန့်အတွင်းတုံ့ပြန်မှုအချိန် +/- စံသွေဖည်ခြင်း၊ အေးဆေးတည်ငြိမ်မှု - ၇၆၇.၇ +/- ၁၉၄; ပျော်ရွှင်သည် - ၇၁၀.၀ +/- ၁၈၆)၊ ဆယ်ကျော်သက်များ (အေးဆေး: ၅၄၉ +/- ၉၁; ပျော်ရွှင်သည်) : 0.001 +/- 0.01), အရွယ်ရောက်ပြီးသူ (အေးဆေး: 767.7 +/- 194; ပျော်ရွှင်: 710.0 +/- 186) ။
သက်ကြီးအုပ်စုများအကြားကွဲပြားခြားနားသောအမှားနှုန်းများကိုအထွေထွေမြန်နှုန်း - တိကျမှန်ကန်သောအပေးအယူဖြင့်ရှင်းပြနိုင်ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရန်မှန်ကန်သော `သွား 'စမ်းသပ်မှုများအတွက်တုံ့ပြန်မှုအချိန်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အဆင်းရဲဆုံးသောတိကျမှုအခြေအနေများသည်အမြန်ဆုံးဖြစ်ပါကအမြန်နှုန်းတိကျမှန်ကန်သောကုန်ချင်းလဲလှယ်မှုအကောင့်သည်အသက်တစ်လျှောက်ကွဲပြားခြားနားသောတိကျမှန်ကန်မှုတွေ့ရှိချက်များကိုရှင်းပြနိုင်သည်။ တိကျမှုတွေ့ရှိချက်များနှင့်မတူဘဲတုံ့ပြန်မှုအချိန်များတွင်အသက်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကြားရှိအပြန်အလှန်စစ်ဆေးမှုသည်ထူးခြားမှုမရှိသောကြောင့်မြန်နှုန်း - တိကျမှန်ကန်သောကုန်သွယ်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများမရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ (F (2,59) = 1.78, p> 0.15) တနည်းအားဖြင့်အုပ်စုသုံးစုစလုံးသည်တိကျသောတွေ့ရှိချက်များကိုထင်ဟပ်ခြင်းမရှိသောပျော်ရွှင်သောမျက်နှာများနှင့်တူညီသောအမြန်တုံ့ပြန်မှုကိုပြသခဲ့သည်။
ဖွံ့ဖြိုးမှုအားဖြင့် modulated တုံ့ပြန်မှုအဆိုပါ ventral striatum အတွက်စပျစ်သီးပြွတ် (x = -4, y = 11, z = -9; p <0.05 svc), အသက်မြေပုံ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည် ပုံ 3A) ။ အသက်အရွယ်၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်းကဆယ်ကျော်သက်များသည် ventral striatum ကိုကလေးများနှင့်လူကြီးများထက်ပျော်ရွှင်ဖွယ်မျက်နှာများနှင့်သိသိသာသာထိတွေ့ဆက်ဆံကြောင်းပြသခဲ့သည် (p's = / <0.01; ပုံ 3B) နှင့်အနိမ့်ဆုံးအတိုင်းအတာအထိ, မျက်နှာများအေးဆေးတည်ငြိမ်ရန် (p ရဲ့ = / <0.06; အနားယူခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအဘို့အအေးဆေးတည်ငြိမ်မှုများအတွက်ရာခိုင်နှုန်း၏ signal ကိုပြောင်းလဲမှု၏ +/- စံသွေဖည်ဆိုလိုသည်: ကလေးများ -0.095 +/− 0.21; ဆယ်ကျော်သက်: 0.046 +/- 0.16; အရွယ်ရောက်ပြီးသူ : -0.051 +/- 0.17) ။ အသက်အရွယ်အနှံ့ပျော်ရွှင်သောမျက်နှာများအားတုန့်ပြန်ခြင်းကိုကိုယ်စားပြုသောအကောင်းဆုံး - သင့်လျော်သောလုပ်ဆောင်ချက်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းသည်ပြောင်မြောက်သော (inverted U) function သည်ပျော်ရွှင်သောမျက်နှာများကိုတုန့်ပြန်သောအားဖြင့်ကွဲလွဲမှု၏သိသာထင်ရှားသောအပိုင်းကိုရှင်းပြသည် (F (1,59) = 10.05, p <0.003) တစ် ဦး linear function ကို (F (1,59) = 0.54, p> 0.4) ကိုပြု၏။ တာဝန်စွမ်းဆောင်ရည် (မှားယွင်းသောနှိုးစက်မှုနှုန်း; F (2,59) = 6.77, p <0.002) နှင့်ကိုက်ညီစမ်းသပ်မှုနံပါတ်များနှင့်အတူထိန်းချုပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်ကွဲပြားမှုများအတွက်ထိန်းချုပ်သည့်အခါဆယ်ကျော်သက်များတွင်စုဆောင်းမှုအတွက် nonlinear တိုးမြှင့်သိသိသာသာရှိနေဆဲ (F (2,59) ) = 7.80, p = 0.007) ။ ပျော်ရွှင်မှုရှိသောစမ်းသပ်မှုများ၊ တည်ငြိမ်သောစမ်းသပ်မှုများနှင့်အဝေးသွားခြင်းနှင့်သွားသောစမ်းသပ်ခြင်းများအထိလုပ်ဆောင်မှုပမာဏသည်လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်မပတ်သက်ပါ (p's> 0.2) ။
အသက်အရွယ်၏ function ကိုအဖြစ် differential ကိုလှုပ်ရှားမှုဖေါ်ပြခြင်းက) ဦး နှောက်ဒေသများ။ Activation, threshold p <0.05, svc ကိုကိုယ်စားပြုသောမြင့်မားသော resolution ကိုခန္ဓာဗေဒစကင်ဖတ်စစ်ဆေးအပေါ်ပြန်ဆိုနေကြသည်။ တုံ့ပြန်မှုမှ ventral striatum (ကဝိုင်း) တုံ့ပြန်မှု B) မှလှုပ်ရှားမှု၏ကြံစည်မှု ...
တုန့်ပြန်မှုမြေပုံ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု (nogo နှင့် go) သည်ကွဲပြားခြားနားသောမှန်ကန်သောယုတ်ညံ့သည့် frontal gyrus (IFG; x = 32, y = 23, z = 3) အပါအ ၀ င်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှုတောင်းဆိုချက်များ၏လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ကွဲပြားစွာသတ်မှတ်ထားသောဒေသများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်သည်။ စမ်းသပ်မှုတွေကိုလုပ်ဖို့ဆွေမျိုး (p ရဲ့ <0.05, တပြင်လုံးကို ဦး နှောက်ကိုတညျ့; ပုံ 4A) ။ Post-hoc သည်အကောင်းဆုံးလျောက်ပတ်သောလုပ်ဆောင်မှုအတွက်စစ်ဆေးခြင်းကိုမှန်ကန်သော IFG တုံ့ပြန်မှုကို linear function (F (1,59) = 4.53, p = 0.037) နှင့် quadratic function (F (1,59) =) မှသိသိသာသာရှင်းပြသည်ဟုညွှန်ပြသည်။ 17, p> 0.6) ။ Posthoc ဆန်းစစ်ခြင်းများအရမှန်ကန်သော IFG သည်ပျော်ရွှင်သောမျက်နှာများ (F (2,59) = 8.95, p <0.005) နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပိုမိုငြိမ်သက်သောလှုပ်ရှားမှုရှိကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင်လက်ျာ IFG ROI စမ်းသပ်မှုသွားကြဖို့ဆွေမျိုး nogo စမ်းသပ်မှုမှအသက်တိုးပွားလာနှင့်အတူတုံ့ပြန်မှုပြင်းအားတစ် linear ကျဆင်းမှုပြသ (r (61) = -0.28, p = 0.026; ပုံ 4B).
အလုပ်၏ function ကို (nogo> go) အဖြစ် differential ကိုလှုပ်ရှားမှုဖေါ်ပြခြင်းက) ဦး နှောက်ဒေသများ။ Activation, p <0.05, တပြင်လုံးကို ဦး နှောက်တညျ့တံခါးခုံကိုကိုယ်စားပြုမြင့်မားတဲ့ resolution ကိုခန္ဓာဗေဒစကင်အပေါ်ပြန်ဆိုနေကြသည်။ ညာဘက်ရှိ B) လှုပ်ရှားမှု၏ကြံစည်မှု ...
စွမ်းဆောင်ရည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်ထိန်းချုပ်သောအခါ, ညာဘက် IFG အတွက်အသက် x ကိုအပြန်အလှန်အလုပ် (p> 0.4) မရှိတော့သိသိသာသာမဟုတ်ခဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အသက်အရွယ်ထက်ညာဘက် IFG အတွက်လှုပ်ရှားမှုပိုမိုအားကောင်းတဲ့ခန့်မှန်းခဲ့ညွှန်ပြ။ ဤဆက်နွယ်မှုကိုတုန့်ပြန်မှုပမာဏ၏တုန့်ပြန်မှုအနေဖြင့် nogo vs. go trial နှင့်အလုံးစုံစွမ်းဆောင်နိုင်မှုကိုပြသသည် (r (61) = 0.39, p = 0.002; see) ပုံ 4C), အရာ (r (61) = 0.28, p = 0.026) စမ်းသပ်မှုတွေတစ်လိုက်ဖက်အရေအတွက်ကိုအတူထိန်းချုပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပုံတူမဖြစ်တော့ဘူးခဲ့သည်။ ပုံ 4C အစွန်းရောက်ဘေးထွက်ဆိုးဝါးသူအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသူအားဖယ်ထုတ်ထားသည့်ပါ ၀ င်သူတစ် ဦး နှင့်ဤဆက်နွယ်မှုကိုဖော်ပြသည်။ ဆက်စပ်မှုဒီတစ် ဦး ချင်းစီအပါအဝင်သိသိသာသာဖြစ်သော်လည်း, ဒီတစ် ဦး ချင်းစီဖယ်ထုတ်ပြီးရလဒ်ဆက်စပ်မှုပို။ ပင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောပြန်ဆို (r (60) = 0.45, p <0.001) ။ အားလုံးအစီရင်ခံတင်ပြဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းစမ်းသပ်မှုတွေကိုမှန်ကန်မှတုံ့ပြန်မှုကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ထို့ကြောင့်မှားယွင်းသောနှိုးစက်များပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသောသူများသည်အပြုအမူဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုကိုအောင်မြင်စွာနှိမ်နင်းနိုင်သည့် nogo trial များ၌မှန်ကန်သော IFG ကိုပိုမိုစုဆောင်းလေ့ရှိသည်။
အဆိုပါ PPI ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစမ်းသပ်မှုတွေသွားကြဖို့ဆွေမျိုးမှန်ကန်သော nogo စမ်းသပ်မှုတွေအဘို့အညာဘက် IFG နှင့်အတူသိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုဖေါ်ပြခြင်း voxels ၏တစ်ခုတည်းစပျစ်သီးပြွတ်လြှော့။ ဤသည်စပျစ်သီးပြွတ်, y 9, z = 13 တွေ့ = လက်ျာ dorsal striatum (x =6သို့ medially နှင့် posteriorly ညာဘက် IFG အမျိုးအနွယ်ကိုဒေသအနီးကနေချဲ့ထွင် ပုံ 5) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်တုံ့ပြန်မှုဖိနှိပ်မှုမှန်မှန်ကန်ကန်တုန့်ပြန်ဖိနှိပ်မှုမလိုအပ်ခဲ့သောအတွက်စမ်းသပ်မှုတွေမှဆွေမျိုးစေ့စပ်ခဲ့သည့်အတွက်စမ်းသပ်မှုတွေကာလအတွင်းသိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ်ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်မှုဖြင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ frontostriatal circuit ကို ဆက်စပ်. အ။
ညာဘက်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ gyrus (IFG အတွက်အမြိုးအနှယျဒေသအပေါ်အခြေခံပြီး Psychophysiological အပြန်အလှန်ရလဒ်များကို; ထဲမှာလှည့်ပတ် ပုံ 4A) ။ လက်ျာ dorsal striatum (caudate) nogo ဆွေမျိုးစဉ်အတွင်းညာဘက် IFG နှင့်အတူသိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ်အလုပ်လုပ်တဲ့နားချင်းဆက်မှီပြ ...
Follow-up, frontostriatal circuitry စမ်းသပ်မှုတွေသွားကြဖို့ nogo ဆွေမျိုးများအတွက်အသက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီး coactivity ၏ differential ကိုဒီဂရီပြသခဲ့သည်ရှိမရှိစမ်းသပ်ပြီးလေ့လာဆန်းစစ်။ ဆက်စပ်မှုမှာပြထားတဲ့ ventral striatum (ထံမှ (ဆနျ့ကငျြဘကိုသွား nogo နှိုင်းယှဉ်) ရွယ် signal ကိုတန်ဖိုးများများအကြား coactivation ၏ဒီဂရီစမ်းသပ်ပြီးအကြား-ဘာသာရပ်များ၏တစ်ဦးကစီးရီး ပုံ 3), လက်ျာ IFG (များတွင်ပြသ ပုံ 4) နှင့်မှာပြထားတဲ့ dorsal striatum ( ပုံ 5) တစ်ဦးချင်းစီအသက်အရွယ်အုပ်စုတစ်စုအတွင်းတွင်။ အတွက်အကျဉ်းချုံးပျြောရှငျသောအခွအေနေကဒေ ပုံ6နှင့်အောက်။ ပျော်ရွှင်သောအခြေအနေကိုကျွန်ုပ်တို့အာရုံစိုက်ကြပြီးဖြစ်သောကြောင့်ပျော်ရွှင်သောသွားစမ်းသပ်မှုများနှင့်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းသောဆွေမျိုးများသည်ချဉ်းကပ်မှုတုံ့ပြန်မှုများကိုအလားအလာရှိသောဆုလာဘ်များအပေါ်ဖိနှိပ်ခြင်း၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ဆောက်မှုကိုလွှမ်းခြုံသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ dorsal striatum နှင့် IFG ကြားရှိ coactivation သည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနည်းသော်လည်းကလေးများသည်ပျော်ရွှင်သော nogo စဉ်အတွင်း vtral နှင့် dorsal striatum အကြားမဖြစ်မနေ coactivation ပြသကြသည် (r (17) = 0.41, p = 0.09) ။ ပြောင်းပြန်, အရွယ်ရောက်ပြီးသူ dorsal striatum နှင့်ညာဘက် IFG (r (0.12) = 24, p = 0.49) အကြားသိသိသာသာ coactivation ပြပေမယ့် ventral နှင့် dorsal striatum (p> 0.013) အကြားမဟုတ်ပါဘူး။ ဆယ်ကျော်သက်များသည် ventral နှင့် dorsal striatum (r (0.8) = 18, p = 0.57) အကြားသိသိသာသာ coactivation နှင့် dorsal striatum နှင့် IFG (r (0.012) = 18, p = 0.54) အကြားသိသိသာသာ coactivation ပြသခဲ့သည်။ အားလုံးဆက်စပ်မှုသိသိသာသာရှိနေဆဲတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဆက်စပ်မှုအတွက်သိသိသာသာကျန်ရှိနေသေးသောလူကြီးများအတွက် dorsal striatum- လက်ျာ IFG ဆက်စပ်မှုမှလွဲ။ သင်တန်းသားများကိုဖြတ်ပြီးတပြင်လုံးကို - ဦး နှောက် signal ကို - ဆူညံသံအချိုးအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုများအတွက်ထိန်းချုပ်မှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။
အကြား-ဘာသာရပ်များအလုပ်လုပ်တဲ့ coactivation ကလေးပျော်ရွှင်သွားလာရင်းစမ်းသပ်မှုတွေမှဆွေမျိုးပျော်ရွှင် nogo စမ်းသပ်မှုတွေအတွက်ရလဒ်, ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသင်တန်းသားများကို။ တံဆိပ်ကပ်ပူဖောင်းတွင်ဖော်ပြပါရှိသည်ဒေသများတွင်ကိုယ်စားပြု ပုံ3(ventral striatum), ပုံ4(ညာ IFG) နှင့် ဂဏန်း ...
လူတစ် ဦး ၏လုပ်ရပ်များကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းသည်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသော၊ ဤလေ့လာမှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောတန်ဖိုးများကိုပြသည့်အချက်များနှင့်ကြုံတွေ့ရသည့်အခါမြီးကောင်ပေါက်များစိတ်မ ၀ င်စားမှုထိန်းချုပ်မှုကိုလျှော့ချရန်ပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားများပေးရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ချဉ်းကပ်မှုတုံ့ပြန်မှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည့်အဓိကကျသော၊ စိတ်ပါ ၀ င်စားမှုလှုံ့ဆော်မှုများ (ဥပမာ - ပျော်ရွှင်သောမျက်နှာများ) ပါ ၀ င်သည့်လုပ်ငန်းတစ်ခုကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းအရာများအပေါ်တွင် မူတည်၍ အပြုသဘောသို့မဟုတ်ကြားနေလှုံ့ဆော်မှုများကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ချဉ်းကပ်ရန်သို့မဟုတ်ရှောင်ရှားရန်ဘာသာရပ်များ၏စွမ်းရည်တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ဆယ်ကျော်သက်များသည်ကလေးများနှင့်လူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ထူးခြားသောအမှားအယွင်းများကိုသရုပ်ပြခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိရပြီးအဓိက၊
ဤရွေ့ကားအမူအကျင့်တွေ့ရှိချက်မြီးကောင်ပေါက်ကလေးများနှင့်လူကြီးများမှအလယ်အလတ်တစ်စာကျွမ်းကျင်မှုမှာကြားနေအခင်းအကျင်းအတွက်အမူအကျင့်ဖိနှိပ်မှုထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်ပါတယ်ပေမယ့်ကြောင်းအကြံပြု, သူတို့ကအစာစားချင်စိတ်တွေကိုဆီသို့ချဉ်းကပ်လှုံ့ဆျောမှုပယ်ဖျက်ဖို့တိကျတဲ့ပျက်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ သုံးယောက်အသက်အရွယ်အုပ်စုများ၏အသီးအသီးဆင်းရဲတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကြိုတင်ခန့်မှန်းမပြုခဲ့ရသောကြားနေတွေကိုထက်ပျော်ရွှင်ဖို့ပိုမြန်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသရုပ်ပြကြောင့်ဤတွေ့ရှိချက်ရိုးရိုး, အမြန်နှုန်း-တိကျမှန်ကန်မှုကုန်ချင်းလဲလှယ်သက်ရောက်မှုများကရှင်းပြခဲ့မရနိုင်ပါ။ biased အဖြစ်ဤအမူအကျင့်ပရိုဖိုင်းအလားအလာဆုလာဘ် (ချဉ်းကပ်၏ဝန်ဆောင်မှုမှာအန္တရာယ်များအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့မြီးကောင်ပေါက်များ၏သီအိုရီအကောင့်နှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်Steinberg, 2004) နှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှနှိုင်းယှဉ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကာလအတွင်းမှာတိုးမြှင့်ဆုလာဘ်ရှာဖေါ်ပြခြင်းနဲ့အတူပါတယ် (လှံ, 2000) ။ မကြာသေးမီက Cauffman နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (2010) ကွဲပြားဆုလာဘ်ဝန်နှင့်အတူတာဝန်များကိုအောင်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုစီးရီးကိုသုံးခြင်းနှင့်အသက် 14-16 နှစ်ပေါင်းထံမှအထွတ်အထိပ်မှအထပ်ထပ်ထို့နောက်ကျဆင်းနေ, ဆုလာဘ် sensitivity ကိုတစ်ဦးပြောင်းပြန်ဦး shaped function ကိုပြသကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ မြီးကောင်ပေါက်များတွင်ဘက်လိုက်ချဉ်းကပ်လှုံ့ဆျောမှု၏ဓာတ်ခွဲခန်းဆန္ဒပြပွဲများ (ကိုလညျးရှု Figner, Mackinlay, Wilkening, & Weber, 2009), ဥပမာ (ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူရိုးရှင်းစွာလွတ်လပ်ရေးသို့မဟုတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းကုသမှုပြောင်းလဲမှုများတစ်ခု function ကိုမဟုတျကွောငျးနိဂုံးအားကောင်း Epstein, 2007တွေ့ Dahl, 2004 ) နောက်ထပ်ဆွေးနွေးမှုသည်။ ဒါဟာ (လည်းနုသိမြင်မှုစည်းမျဉ်းစွမ်းရည်မှခုတညျးသောဂုဏျရညျမဟုတ်ပါဘူးYurgelun-Todd, 2007), ပတ်ဝန်းကျင်၏စိတ်ခွန်အားနိုးရှုထောင့်အဖြစ်ပေးထားသောအခြေအနေတွင်အပြုအမူထိန်းညှိနိုင်စွမ်းကိုသြဇာလွှမ်းမိုး။ အဲဒီအစား, ဒီအလုပ်နှစ်ခုလုံးကိုသိမြင်မှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေဖြစ်စဉ်များ၏ရငျ့ဘယ်နေရာတွေမှာ (မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းအန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအတွက်ရောက်လာသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့အပြန်အလှန်ကြောင်းအကြံပြုကာဇီ, Getz, et al ။ , 2008; Steinberg, 2008) ။ လက်ရှိအမူအကျင့်ဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်များအရအဓိကအစာစားခြင်းလမ်းကြောင်းများသို့အမူအကျင့်ဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှုကိုဖိနှိပ်ရန်လိုအပ်သည့်အခါဆယ်ကျော်သက်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်အခြားအသက်အရွယ်အုပ်စုများတွင်မတွေ့ရှိရသည့်ပြသနာများကိုပြသနေသည်။
အပြုအမူဆိုင်ရာတွေ့ရှိချက်များကသိမှုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးမှုစနစ်များကိုရင့်ကျက်သောရင့်ကျက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ neurobiological ယူဆချက်ကို ဦး တည်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများနှင့်အညီပြောင်းလဲနေသောအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကမြီးကောင်ပေါက်များ၏အလားအလာရှိသောဆုလာဘ်များကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်စွမ်းရှိသည်ဟုထင်မြင်ယူဆရသည့်ဒေသများဖြစ်သည်။Somerville & Casey, 2010) ။ ကျနော်တို့ပျော်ရွှင်မျက်နှာများမှဆယ်ကျော်သက်များတွင်အကျယ်ချဲ့လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတစ်ခု nonlinear ပုံစံဖေါ်ပြခြင်းတို့သည် ventral striatum တစ်ဒေသလေ့လာသည်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်မြီးကောင်ပေါက်များတွင်လှုံ့ဆော်မှုများဆုလာဘ်ဂုဏ်သတ္တိများ၏ပုံကြီးချဲ့ကိုယ်စားပြုမှုသရုပ်ပြကြိုတင်အလုပ်နှင့်အတူပါတယ်။ ဥပမာ, ငွေကြေးမက်လုံးပေးလက်ခံရရှိ (အရွယ်ရောက်သူနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မြီးကောင်ပေါက်များ၏ ventral striatum အတွက်ပုံကြီးချဲ့တုံ့ပြန်မှုမှဦးဆောင်Ernst, et al ။ , 2005) နှင့်ကလေးများ (သွပ်ရည်စိမ်, et al ။ , 2006; ဗန် Leijenhorst, et al ။ , 2009) ။ ဆုလာဘ်ရှယ်ယာမှာဖြစ်သောများအတွက်စမ်းဘို့ပြင်ဆင်နေစဉ်လူကြီးများမှဆွေမျိုး, မြီးကောင်ပေါက် (တိုးမြှင် ventral striatal လှုပ်ရှားမှုပြသGeier, et al ။ , 2010), ဆယ်ကျော်သက်အတွက် ventral striatum ရဲ့အဆင့်မှာလှုံ့ဆော်အပြုအမူ၏ upregulation အကြံပြုခြင်း။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ပျော်ရွှင်မျက်နှာများထက်အငယျဆုံးသောအတိုင်းအတာအထိသော်လည်း, ထို ventral striatum အတွက်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်ကြားနေမျက်နှာအသုံးအနှုန်းတွေတစ်ဆိုနိုင်သည် သာ. ကြီးတုန့်ပြန်လေ့လာသည်။ ဒီပုံစံအစာစားချင်စိတ်လှုံ့ဆော်မှုကိုပိုမိုအဓိက ventral striatal တုံ့ပြန်မှုစုဆောင်းပေမယ့်မြီးကောင်ပေါက်အတွက် ventral striatum ၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုလည်းကလေးများနှင့်လူကြီးများမှဆွေမျိုးလျှော့တိကျသောအားဖြင့်မှတ်သားစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။
စမ်းသပ်မှုတွေသွားကြဖို့ nogo နှိုင်းယှဉ်ဖိနှိပ်မှုကိုမှန်ကန်စွာသိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးတောင်းဆိုချက်များကိုအနိမ့်ခဲ့ကြသည့်အတွက်စမ်းသပ်မှုတွေမှဆွေမျိုး (nogo စမ်းသပ်မှုတွေ) စေ့စပ်ခဲ့သည့်အတွက်စမ်းသပ်မှုတွေမှတုံ့ပြန်မှုများ၏အထီးကျန် enabled ။ ထိုသို့အတိတ်အလုပ် (ကာလ၌ရှိသကဲ့သို့မှတ်သားရပါမည်Durston, Davidson, et al ။ , 2003; ယုန်, et al ။ , 2005; ယုန်, et al ။ , 2008), အမှားစမ်းသပ်မှုတွေသီးခြားစီလုပ်ပါတယ်နှင့်အရှင်ကဒီမှာလှုပ်ရှားမှုကွဲပြားခြားနားမှုမှန်ကန်သောဖိနှိပ်မှုပြည့်စုံခဲ့သောထိုကိုယ်စားပြုခဲ့သည်။ nogo စမ်းသပ်မှုတွေစဉ်အတွင်းကျနော်တို့ငယ်ရွယ်သောအသက်အရွယ်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် သာ. ကြီးမြတ် prefrontal စုဆောင်းမှုလေ့လာသည်။ Prefrontal လှုပ်ရှားမှုကိုလည်းချဉ်းကပ်တုံ့ပြန်မှုနှိပ်ကွပ်မှာခြုံငုံလျော့နည်းအောင်မြင်သောလူပုဂ္ဂိုလ်များအောင်မြင်သောဖိနှိပ်မှုစမ်းသပ်မှုတွေပိုညာဘက် IFG လှုပ်ရှားမှုပြသထိုကဲ့သို့သောအကြောင်း, စွမ်းဆောင်ရည်ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီပုံစံ (ပါရာဒိုင်း nogo သွားလာရင်းသုံးပြီးကြိုတင်အလုပ်နှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်Durston, Davidson, et al ။ , 2003; Durston, သောမတ်စ်, ယန်, et al ။ , 2002; Luna & Sweeney, 2004), ဖိနှိပ်မှုကိုမှန်ကန်စွာမဖြစ်၏ခဲ့သည့်အတွက်စမ်းသပ်မှုတွေများအတွက်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ gyrus ၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသတင်းပို့။ လှုပ်ရှားမှုနဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အကြားဆက်ဆံရေး prefrontal ထိန်းချုပ်မှုအရင်းအမြစ်များကိုအများဆုံးအခက်အခဲတုံ့ပြန်မှုဖိနှိပ်မှု (ဆိုလိုသည်မှာ, အသက်ပျိုသင်တန်းသားများကို) ပြီးမြောက်သူတစ်ဦးချင်းစီအတွက်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောဘွဲ့စေ့စပ်ခဲ့ကြကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
ပိုများသောယေဘုယျအားဖြင့်, သိမြင်ဝယ်လိုအား၏အခင်းအကျင်းအတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် prefrontal ဒေသစုဆောင်းမှုအတွက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာဆိုင်း၏သဘောသဘာဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပေအတွက်လျော့နည်းသဘောတူညီချက်လည်းမရှိ။ လက်ရှိလေ့လာမှုတှငျကြှနျုပျတို့ activation ပြင်းအားအတွက်အသက်အရွယ်-related အပြောင်းအလဲများအနက်ကိုဘော်ပြမှအမူအကျင့်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုအပေါ်မှီခို။ ဤနေရာတွင်တင်ပြဘာနှင့်ကိုက်ညီတချို့ကလေ့လာမှုများ,, (တိုးပွားလာအသက်အရွယ်နှင့်အတူ prefrontal cortical ဒေသတဖြည်းဖြည်းပြောင်စုဆောင်းမှုသရုပ်ပြပါပြီHardin, et al ။ , 2009; Velanova, ဝီ & Luna, 2008) ။ ဒီပုံစံ (ကပိုပျံ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအတွက်ရရှိလာတဲ့အငယ်လူဦးရေအတွက်အတော်လေးလျော့နည်းအထူးပြုအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူနိုင်Durston, et al ။ , 2006) ။ တို့ကအကြံပြုအဖြစ်အငယ်အသက်အရွယ်အတွက် သာ. ကွီးမွတျစုဆောင်းမှုကိုလည်းအောင်မြင်စွာဟောင်းများကိုတစ်ဦးချင်းစီကဲ့သို့တူညီသောတာဝန်ဖြည့်စွက်နိုင်ရန်အတွက်အသက်ငယ်တစ်ဦးချင်းစီ၏လိုအပ်သိမြင်မှုတောင်းဆိုချက်များကိုတိုးမြှင့်၏ရလဒ်ဖြစ်မည်အကြောင်း Velanova နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (2008) antisaccade အလုပ်ကိုအသုံးပြု။ အလားတူတွေ့ရှိချက်အပေါ်အခြေခံပါတယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်မှားယွင်းသောနှိုးစက်အမှားအယွင်းအမြောက်အများရှိခဲ့သောသင်တန်းသားများတွင်ပိုမိုစုဆောင်းမှုရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့လေ့လာတွေ့ရှိချက်ကဤအနက်ကိုထောက်ခံသည်။ သို့သော်ပိုမိုသတိပြုသင့်သည်မှာပိုမိုအားကောင်းသော (သို့) အားနည်းသော activation သည်ရင့်ကျက်မှု၏အမှတ်အသားဟုတ်မဟုတ်နှင့် ပတ်သက်၍ ငြင်းခုံမှုများရှိနေဆဲဖြစ်သည်။Bunge & Wright, 2007; Luna, Padmanabhan, & O'Hearn, 2010) အခြားအလုပ် (functional ရငျ့တစ်ခုညွှန်ပြချက်အတိုင်းပိုကြီး-ပြင်းအားလှုပ်ရှားမှုအကြံပြုထားပါတယ်အဖြစ်Klingberg, Forssberg, & Westerberg, 2002; Bunge, Dudukovic, Thomason, Vaidya, & Gabrieli, 2002; ရူဗျောဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့, et al ။ , 2006; Crone, Wendelken, Donohue, ဗန် Leijenhorst, & Bunge, 2006) ။ အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာအလုပ်ပိုပြီးအပြည့်အဝဤပြဿနာကိုအကြောင်းကြားရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
ဆက်သွယ်မှုဖော်ထုတ် frontostriatal circuitry, ဖိနှိပ်မှုလိုအပ်မဟုတ်စမ်းသပ်မှုတွေမှဆွေမျိုးမှန်ကန်သောဖိနှိပ်မှုစမ်းသပ်မှုတွေကာလအတွင်းသိသိသာသာအားကောင်းအလုပ်လုပ်တဲ့နားချင်းဆက်မှီသရုပ်ပြကြောင်းအထူးသလက်ျာ dorsal caudate နှင့်ယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ gyrus လေ့လာဆန်းစစ်။ Striatocortical interaction က (ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူစည်းမျဉ်းပြီးမြောက်ဖို့အလယ်ပိုင်းဖြစ်တာဝန်များကိုနှင့်မျိုးစိတ်တစ်လွှားပြသပြီDelgado, et al ။ , 2004; Durston, သောမတ်စ်, ယန်, et al ။ , 2002; Schultz, Tremblay, & Hollerman, 2000), နှင့်ပိုပြီးတိတိကျကျ Impulses သတင်းပို့၏ဖိနှိပ်မှုအတွက် (Miller က & Cohen ကို, 2001) ။ အဆိုပါ dorsal striatum နှင့် prefrontal cortex အကြားဆက်သွယ်မှုသည် (အမူအကျင့်ကို output နှင့်အတူဆုလာဘ်အသင်းအဖွဲ့များကိုပေါင်းစပ်ဖို့အရေးပါဖြစ်မျောက်ဝံများမှာပြခဲ့ကြPasupathy & Miller, 2005အရွယ်ရောက်ပြီးသူလူ့ပုံရိပ်စာပေအားဖြင့် paralleled), တစ်ဦးတွေ့ရှိချက် (သွပ်ရည်စိမ်, et al ။ , 2005; Poldrack, Prabhakaran, Seger, & Gabrieli, 1999) ။ Developmental, ကလေးများနှင့်လူကြီးများ (တစ်ဆွဲဆောင်မှုတုံ့ပြန်မှု၏ညာဘက် frontostriatal ဆားကစ်ထောက်ခံမှုဖိနှိပ်မှု၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကာဇီ, et al ။ , 1997; Durston, သောမတ်စ်, Worden, ယန်, & Casey, 2002; Durston, သောမတ်စ်, ယန်, et al ။ , 2002) နှင့်ထိုကဲ့သို့သော ADHD အဖြစ်ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်အတွက် hypo-တုံ့ပြန်မှုများမှာ (ကာဇီ, et al ။ , 2007; Durston, စပါး, et al ။ , 2003; Epstein, et al ။ , 2007; Vaidya, et al ။ , 1998) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ရည်မှန်းချက်-oriented လုပ်ရပ်များ၏ပုံသဏ္ဍာန်၌ဤ circuitry များအတွက်ယေဘုယျအခန်းကဏ္ဍထောက်ခံပါတယ်။
ဒီ circuitry defining ပြီးနောက်ကျနော်တို့ကလေးသည်, ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူသင်တန်းသားများကိုအကြားတွင် differential ကို coactivation ပုံစံများအဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ဆယ်ကျော်သက်သင်တန်းသားများအကြား-ဘာသာရပ်များ dorsal striatal-prefrontal တုံ့ပြန်မှု၏နားဆက်မှီရာတွင်သိသာထင်ရှားသောပြသခဲ့သည်။ တစ်နည်းမှာ dorsal striatum ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တော်မှာအဘယ်သူသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်ဆယ်ကျော်သက်သင်တန်းသားများကိုလည်းမှန်ကန်စွာပျော်ရွှင်မျက်နှာများဖို့ချဉ်းကပ်မှုတုံ့ပြန်မှုနှိပ်ကွပ်အခါယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ cortex ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့တော်မှာ။ သွယ်ဝိုက်သော်လည်းဤတွေ့ရှိချက် striatocortical တုံ့ပြန်မှုကလေးများဆွေမျိုးဆယ်ကျော်သက်များနှင့်လူကြီးများအတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတော်လေး သာ. ကြီးမြတ်ဒီဂရီကိုပြသသောအယူအဆထောက်ခံပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်သင်တန်းသားများအတွက်, ဒီ frontostriatal တုံ့ပြန်မှုကိုလည်းသိသိသာသာ ventral-dorsal striatal နားချင်းဆက်မှီဖြင့်လိုက်ပါသွားခဲ့သည်။ ဒီ circuitry အကြောင်းကိုလူသိများသည်အဘယ်အရာကိုအပေါ် အခြေခံ. (Haber, Kim, Mailly, & Calzavara, 2006), ကျနော်တို့ကိုပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန် ventral striatum သက်ဝင်စေဖို့တော်မှာအဘယ်သူသည်ဆယ်ကျော်သက်ကိုလည်းမှန်ကန်စွာအပြုသဘောဆောင်တွေကိုမှချဉ်းကပ်ဖိနှိပ်နိုင်ရန်အတွက် သာ. ကြီးမြတ် dorsal striatal-prefrontal ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုလိုအပ်ကြောင်းသုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါ ventral striatum, dorsal striatum နှင့် prefrontal cortex အကြားအပြန်အလှန်သင်ယူမှု, ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်အပြုအမူ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတွက်အရေးပါဖြစ်ကြသည်။ အမှန်စင်စစ်၊ ပါကင်ဆန်ရောဂါရှိသူများသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းလှုပ်ရှားမှု၏အဓိကကျသောအနှောင့်အယှက်ပေးမှုများကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်စိတ်ခွန်အားနိုးစွာသက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ရွေးချယ်ခြင်းတွင်ရွေးချယ်မှုနည်းပါးကြောင်းပြသသည် (Cools, Ivry, & D'Espostio, 2006) ။ ခန္ဓာဗေဒ projection လယ်ကွင်း, Haber အားဖြင့်အလုပ်နှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ (ခြေရာခံခြင်းအားဖြင့်Haber, et al ။ , 2006) ကို ventral striatum ကနေအဘိုးပြတ်-သက်ဆိုင်ရာအချက်ပြများအတွက် key ကို convergence အမှတ်အဖြစ် dorsal striatum ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်နှင့် prefrontal cortex အပါအဝင်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်အရေးကြီးသောဦးနှောက်၏ဒေသများထံမှအချက်ပြမှုများ (ကိုလညျးရှု Haber & Knutson, 2009) ။ ထိုမှတပါး, ရည်မှန်းချက်ညွှန်ကြားအပြုအမူ (မော်တာ, oculomotor, နှိုးဆွ-မောင်းနှင်, တုံ့ပြန်မှု-မောင်းနှင်သို့မဟုတ်စိတ်ခွန်အားနိုး) ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများပါဝင်ပတ်သက် "အပြိုင်" striatocortical ကွင်းရှည်လျားပါ (Basal ganglia များ၏အဆင့်မှာဆက်သွယ်ဖို့အကြံပြုခဲ့ကြအလက်ဇန်းဒါး & Crutcher, 1990; ကာဇီ, 2000; ကာဇီ, Durston, & Fossella, 2001; Casey, Tottenham, & Fossella, 2002) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက် subcortical စနစ်များအလုပ်လုပ်တဲ့င့်ကျက်မှုသို့ရောက်ရှိခံရဖို့ပေါ်လာနှင့် subcortical ဒေသများအချက်ပြအတော်လေးအစောပိုင်းဖွံ့ဖြိုးနေချိန်တွင်ဤထိန်းချုပ်မှုဒေသများထံမှအချက်ပြထိပ်တန်းချပိုပြီးအလွန်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုသောအခါ, striatum ရဲ့အဆင့်မှာဤအရာ၌ကွင်း၏ differential ကိုဘက်လိုက်မှုနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်ကြသည်။
ဤနေရာတွင်တင်ပြတွေ့ရှိချက်ဟာသူတို့ရဲ့န့်အသတ်များအလငျး၌ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်။ ပထမဦးစွာကတတိယစိတ်ခံစားမှုအမျိုးအစား, ကြောက်မက်ဘွယ်သောမျက်နှာစမ်းသပ်လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်ယခင်အစီရင်ခံစာ၏အာရုံ (ကာလအတွင်းပစ္စုပ္ပန်ခဲ့ကြောင်းအတိအလင်းအသိအမှတ်ပြုရပါမည်ယုန် et al ။ , 2008) ။ အဆိုပါအေးဆေးမျက်နှာခွအေနအေနှစ်ဦးစလုံးအစီရင်ခံစာများအတွက်ထိန်းချုပ်ခွအေနအေအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ အမူအကျင့်တွေ့ရှိချက်တစ်ခုအလုပ်လုပ်တဲ့စကင်အတွက်ကြောက်မျက်နှာများ၏ရှေ့မှောက်တွင်ကွဲပြားခြားနားသည်အခြားနှစ်ဦးကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုအမျိုးအစားထက်အပြုအမူတိကျမှန်ကန်မှု modulate ခဲ့ပါဘူးအကြံပြုသော်လည်း, ကကြောက်မက်ဘွယ်သောမျက်နှာများ၏ရှေ့မှောက်တွင်ယင်းရရှိနိုင်ပါသည်အတိုင်းအတာအထိခိုက်မခံကြဘူးသောနည်းလမ်းများအတွက်တွေ့ရှိချက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်မင်္ဂလာမျက်နှာများစာစားချင်စိတ်ကိုတနျဖိုး၏စောင့်ကြည့်လေ့လာသက်ရောက်မှုမှလှူဒါန်းခဲ့ကြနိုင်နှစ်ဦးစလုံးရာ၏, valence နှင့် salience အတွက်အေးဆေးတည်ငြိမ်မျက်နှာများကှာခွား။ တစ်ဦးကစက္ကန့်အတိုင်းအတာများကန့်သတ်မယ့်ထိန်းချုပ်ခွအေနအေအဖြစ်အေးဆေးတည်ငြိမ်မျက်နှာများ၏အသုံးပြုမှုအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ စံတန်ဖိုးဒေတာအေးဆေးတည်ငြိမ်မျက်နှာများ (ပျော်ရွှင်မျက်နှာများထက်လျော့နည်းအပြုသဘောနှင့် arousal ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုသော်လည်းစပါး et al ။ , 2009), ကျနော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသည်ဤ ratings စုဆောင်းမကအေးဆေးတည်ငြိမ်မျက်နှာများသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ညာဘက်မှာရှိတဲ့ရစေရန်အပြုသဘောအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခဲ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရလဒ်အသုံးအနှုန်းများမှာ coactivation တွေ့ရှိချက်များကျိုးနွံသဘောသဘာဝကိုလည်းအသိအမှတ်ပြုရပါမည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ pubertal အခြေအနေနှင့် endogenous ဟော်မုန်းအတိုင်းအတာဝယ်ယူမခံခဲ့ရပါ။ seminal သုတေသန (ပျံ့နှံ့နေတဲ့ gonadal ဟော်မုန်းဖှံ့ဖွိုးတိုးဖြတ်ပြီးဦးနှောက် function ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးဖို့စည်းရုံးရေးနှင့်လှုပ်ရှားမှုများနှစ်ဦးစလုံးယန္တရားများကိုအကျိုးသက်ရောက်သောနညျးလမျးမြားကိုသရုပ်ပြထားပါတယ်Romeo & Sisk, 2001; Sisk & Foster, 2004; Steinberg, 2008) နှင့် pubertal အခြေအနေနှင့်အာရုံခံစားမှုရှာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု (ကဲ့သို့သောအစာစားချင်စိတ်အပြုအမူတွေအကြားကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဆက်ဆံရေးမျိုးကိုပြသမာတင် et al ။ , 2002; မြင် Forbes & Dahl, 2010) ။ ဟော်မုန်းအတိုင်းအတာအပါအဝင်အနာဂတ်သုတေသန striatocortical ဖွံ့ဖြိုးရေး, ဟော်မုန်းရငျ့နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာရလဒ်များ (အကြားဆက်ဆံရေးအကြောင်းကြားစေခြင်းငှါBlakemore, Burnett, & Dahl, 2010).
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (လူမှုရေးကျအောင်တဲ့ကာလအဖြစ်ဖော်ပြထားသည်နယ်လ်ဆင်, Leibenluft, McClure, & ထင်းရူး, 2005), မိဘများနှင့်အတူအချိန်လျော့နည်းနှင့်အတော်လေးစောင့်ကြည့်လေ့လာမရွယ်တူချင်းများနှင့်အတူသုံးစွဲပိုမိုအချိန်နှင့်အတူ။ လွတ်လပ်မှုတွင်ဤတိုးပွားလာမှုနှင့်အတူမိဘများနှင့်အခြားစောင့်ရှောက်သူများကအပြုအမူကိုကန့်သတ်သည့်အခါကလေးဘဝနှင့်ခြားနားစွာလူတစ် ဦး ၏ကိုယ်ပိုင်အပြုအမူကိုထိန်းညှိရန်လိုအပ်လာသည်။ နုသိသောသိမှုထိန်းချုပ်မှုစွမ်းရည်ကိုဆယ်ကျော်သက်များ၏အန္တရာယ်များသောအပြုအမူများအတွက်လုံလောက်သောရှင်းပြချက်အဖြစ်မကြာခဏထည့်သွင်းစဉ်းစားလေ့ရှိသော်လည်းအပြုအမူနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအဆင့်နှစ်ခုစလုံးတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရှိဘက်လိုက်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဆိုင်ရာမောင်းနှင်မှုများနှင့်ပတ်သက်သောလက်ရှိတွေ့ရှိချက်များလည်းပါ ၀ င်သည်။ အမှန်စင်စစ်၊ ဤအချိန်ကာလအတွင်းခံစားခဲ့ရသောပိုမိုကြီးမားသောလွတ်လပ်မှုသည်ပိုမိုအားကောင်းသည့်စိတ်အားထက်သန်မှုရှိသောမောင်းနှင်အားများကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ ဤသည်ချဉ်းကပ်မှုလှုံ့ဆျောမှု ventral striatum ၏ခိုင်မာတဲ့ subcortical အချက်ပြခြင်းဖြင့်ထောက်ခံနိုင်ပါသည်။ လူတစ် ဦး တစ်ယောက်သည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အပြုအမူများကိုထိန်းညှိရန်လိုအပ်သည့်အခြေအနေများတွင်နေရာချထားသောအခါဆုံးရှုံးမှုများကိုထိန်းချုပ်ရန် - အချို့သောစွန့်စားမှုများသောအပြုအမူများကိုထိန်းချုပ်ခြင်းသည်ကြိုတင်ရှေ့ပြေးစည်းမျဉ်းစနစ်၏ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အတော်အတန်အတွေ့အကြုံမရှိသော၊ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအတွေ့အကြုံသည်ဤချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူများကိုထိန်းညှိနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုပုံသွင်းသည်။ ၎င်းသည်ပြောင်းလဲမှုရှိသည့်ချဉ်းကပ်မှုနှင့်စည်းမျဉ်းအချက်ပြအချက်ပြစနစ်အကြားမျှတမှုရှိသောအခြေအနေသို့ပြောင်းလဲသွားပြီးသွေးဆောင်မှုကိုတွန်းလှန်နိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုပိုမိုခိုင်မာစေသည်။
ကျနော်တို့ကျေးဇူးတင်လျက် Doug ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးရွှေဘောလုံး, Adriana သွပ်ရည်စိမ်, ဂယ်ရီဂလိုဗာ, ဗစ်တိုးရီးယား Libby, အဲရီကာ Ruberry, Theresa Teslovich, Nim စပါး, Henning Voss နှင့် Weill အတှကျကော်နဲလ်မှာ Citigroup ဇီဝဆေးပညာ Imaging ကရေးစင်တာများ၏ဇီဝဆေးပညာ Imaging က Core Facility မှာအရင်းအမြစ်များနှင့်ဝန်ထမ်း၏အကူအညီဝန်ခံ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကောလိပ်။ ဤလုပ်ငန်းကိုစိတ်ကျန်းမာရေးအမျိုးသားအင်စတီကျုကထောက်ခံခဲ့သည် P50MH062196 နှင့် P50MH079513, အမျိုးသား Institute မှမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုထောက်ပံ့ငွေများ R01DA018879 နှင့် T32DA007274 နှင့်စိတ်ကျန်းမာရေး Fellowship F31MH073265 အမျိုးသားအင်စတီကျုအဖြစ် K99 MH087813 (LHS) ပေးအပ်။
အလက်ဇန်းဒါး GE, Crutcher MD ။ Basal ganglia ဆားကစ်၏ functional ဗိသုကာ: အပြိုင်အပြောင်းအလဲနဲ့၏အာရုံကြောအလွှာဟာ။ အာရုံကြောသိပ္ပံအတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ 1990;13(7): 266-271 ။
Balleine BW, Delgado MR, Hikosaka O. ဆုလာဘ်များနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းအတွက် dorsal striatum ရဲ့အခန်းကဏ္ဍ။ J ကို neuroscience ။ 2007;27(31): 8161-8165 ။ [PubMed]
Blakemore SJ, ဘားနက်က S, Dahl RE ။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ထဲမှာအပျိုဖော်ဝင်၏အခန်းကဏ္ဍကို။ လူ့ဦးနှောက်ပုံထုတ်ခြင်း။ 2010;31: 926-933 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Bung လုပ် SA, Dudukovic မိုင်, Thomason ME, Vaidya CJ, Gabrieli JD ။ ကလေးများအတွက်မှတ်ဥာဏ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နုတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးပံ့ပိုးမှုများကို: fMRI ထံမှသက်သေအထောက်အထား။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2002;33(2): 301-311 ။ [PubMed]
Bung လုပ် SA, Wright SB ။ အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်နှင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက် Neurodevelopmental အပြောင်းအလဲများကို။ Neurobiology အတွက်လက်ရှိထင်မြင်ချက်။ 2007;17: 243-250 ။ [PubMed]
Carlezon WA, ပညာရှိ RA ။ nuleus အတွက် phencyclidine နှင့်ဆက်စပ်မူးယစ်ဆေးဝါးအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောလုပ်ရပ်များ shell ကိုနှင့် orbitofrontal cortex accumbens ။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 1996;16(9): 3112-3122 ။ [PubMed]
ကာဇီ BJ ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမမှန်အတွက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုပြတ်တောက်: ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရ frontostriatal circuitry တစ် mechanistic မော်ဒယ်။ ခုနှစ်တွင်: Siegler RS, McClelland JL, အယ်ဒီတာများ။ သိမှုဖွံ့ဖြိုးရေး mechanisms: သိမှတ်ခံစားမှုအပေါ် Carnegie စာတမ်းဖတ်ပွဲ။ vol ။ 28 ။ Erlbaum; Hillsdale, NJ: 2000 ။
ကာဇီ BJ, Castellanos FX, Giedd ဖြစ်မှု, နားမှာ WL, ဟမ်ဘာဂါ SD, Schubert AB, et al ။ တုန့်ပြန်တားစီးနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကို-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါ၌တရား frontostriatal circuitry ၏ဆိုလို။ ကလေးသူငယ်၏အမေရိကန်အကယ်ဒမီနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဂျာနယ်။ 1997;36(3): 374-383 ။
ကာဇီ BJ, Durston S က, Fossella ဂျေအေ။ သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးတစ် maechanistic မော်ဒယ်သက်သေအထောက်အထား။ လက်တွေ့အာရုံကြောသိပ္ပံသုတေသန။ 2001;1: 267-282 ။
ကာဇီ BJ, Epstein ဖြစ်မှု, Buhle J ကို, Liston ကို C, Davidson MC, Tonev ST, et al ။ Frontostriatal ဆက်သွယ်မှုနဲ့ ADHD နှင့်အတူမိဘကလေး dyads အတွက်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍကို။ စိတ်ရောဂါကုသမှု၏အမေရိကန်ဂျာနယ်။ 2007;164(11): 1729-1736 ။ [PubMed]
ကာဇီ BJ, Getz S ကိုသွပ်ရည်စိမ်အေအဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 2008;28(1): 62-77 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ကာဇီ BJ, ဂျုံးစ် RM, Hare တီအဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ 2008;1124: 111-126 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ကာဇီ BJ, သောမတ်စ် KM, ဝလေ TF, Badgaiyan RD, Eccard CH, Jennings JR, Crone EA ၏။ တုံ့ပြန်မှုပဋိပက္ခ, အာရုံစူးစိုက်မှုရွေးချယ်ရေးနှင့် functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်နှင့်အတူမျှော်မှန်း၏ Dissociation ။ သိပ္ပံအမျိုးသားအကယ်ဒမီ၏တရားစွဲဆိုမှု။ 2000;97(15): 8728-8733 ။
ကာဇီ BJ, စပါး N ကို, မှတ်ဉာဏ်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့မော်ဒယ်ဆီသို့ Fossella ဂျေလက်တွေ့, ပုံရိပ်, တွေ့ရှိရပါသည်နှင့်မျိုးရိုးဗီဇချဉ်းကပ်။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ Psychobiology ။ 2002;40(3): 237-254 ။ [PubMed]
Cauffman အီး, Shulman EP, Steinberg L ကို, Claus အီး, Banich MT, ဂရေဟမ် SJ, et al ။ အဆိုပါအိုင်အိုဝါလောင်းကစား Task ကိုပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအားဖြင့်ရည်ညွှန်းအဖြစ်ကိုထိခိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချအတွက်ခေတ်ကွဲပြားခြားနားမှု။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာ။ 2010;46(1): 193-207 ။ [PubMed]
Cools R, Ivry RB, D'Espostio M. လူသားများ၏လှုံ့ဆော်မှုသည်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သောအပြောင်းအလဲများကိုတုံ့ပြန်ရန်လိုအပ်သည်။ သိမှုအာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2006;18(12): 1973-1983 ။ [PubMed]
ကော့ RW ။ AFNI: အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု neuroimages ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့် visualization ဘို့ဆော့ဝဲ။ ကွန်ပျူတာနှင့်ဇီဝဆေးပညာသုတေသန။ 1996;29: 162-173 ။ [PubMed]
Crone EA ၏, Wendelken ကို C, Donohue S က, ဗန် Leijenhorst L ကို, Bung လုပ် SA ။ မှတ်ဉာဏ်အလုပ်လုပ်ကိုင်အတွက်သတင်းအချက်အလက် manipulate နိုင်စွမ်း၏ Neurocognitive ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2006;103(24): 9315-9320 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Dahl RE ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု: အားနည်းချက်များနှင့်အခွင့်အလမ်းများတစ်ဦးကကာလ။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ 2004;1021: 1-22 ။ [PubMed]
Delgado MR, Stenger VA သို့, Fiez ဂျေအေ။ လူ့ caudate နျူကလိယအတွက်လှုံ့ဆျောမှု-မှီခိုတုံ့ပြန်မှု။ Cereb Cortex ။ 2004;14(9): 1022-1030 ။ [PubMed]
Durston S က, et al Davidson MC, သောမတ်စ် KM, Worden က MS, စပါး N ကို, Martinez တစ်ဦး။ ပဋိပက္ခနှင့်လျင်မြန်စွာရောထွေး-ရုံးတင်စစ်ဆေးဖြစ်ရပ်-ဆက်စပ် fMRI သုံးပြီးတုန့်ပြန်ယှဉ်ပြိုင် parametric ကိုင်တွယ်။ Neuroimage ။ 2003;20(4): 2135-2141 ။ [PubMed]
Durston S က, et al Davidson MC, စပါး N ကို, သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Spicer J ကို, Fossella ဂျာ။ ဖှံ့ဖွိုးတိုးနှင့်အတူ focal cortical လှုပ်ရှားမှုမှပျံ့ထံမှတစ်ဦးကပြောင်းကုန်ပြီ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသိပ္ပံ။ 2006;9(1): 1-8 ။ [PubMed]
Durston S ကိုသောမတ်စ် KM, Worden က MS, ယန် Y ကို, Casey BJ ။ တားစီးပေါ်အခြေအနေတွင်ရှေ့အများ၏အကျိုးသက်ရောက်: ဖြစ်ရပ်တစ်ခု-related fMRI လေ့လာမှု။ Neuroimage ။ 2002;16(2): 449-453 ။ [PubMed]
Durston S ကိုသောမတ်စ် KM ယန် Y ကို, Ulug လေး, Zimmerman RD, Casey BJ ။ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်တစ်ဦးကအာရုံကြောအခြေခံ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာသိပ္ပံ။ 2002;5(4): F9-F16 ။
Durston S က, စပါး NT, သောမတ်စ် KM, et al Davidson MC, Eigsti ထားတဲ့ IM, ယန် Y ကို။ နှင့် ADHD မပါဘဲကလေးငယ်များအတွက် striatal activation ၏ differential ပုံစံများ။ ဟားဗတ်။ 2003;53(10): 871-878 ။ [PubMed]
Eaton LK, Kann L, Kinchen S, Shanklin S, Ross J, Hawkins J ။ လူငယ်အန္တရာယ်အပြုအမူစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း - ယူနိုက်တက်စတိတ် ၂၀၀၇၊ ရောဂါနှင့်သေဆုံးမှုအပတ်စဉ်အစီရင်ခံစာ။ 2008;57(SS04): 1-131 ။ [PubMed]
Epstein ဖြစ်မှု, Casey BJ, Tonev ST, Davidson က M, Reiss AL, Garrett တစ်ဦးက, et al ။ ADHD- နှင့် ADHD နှင့်အတူ concordantly ထိခိုက်နစ်နာမိဘကလေး dyads အတွက်ဆေးဝါး-related ဦးနှောက်ကို Activation ဆိုးကျိုးများ။ ကလေးစိတ်ပညာနှင့်စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဂျာနယ်။ 2007;48(9): 899-913 ။ [PubMed]
Epstein R. မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ဆန့်ကျင်မှု: တိုင်းဆယ်ကျော်သက်အတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်။ Quill ယာဉ်မောင်းစာအုပ်များ; Fresno,, CA: 2007 ။
Ernst M က, နယ်လ်ဆင် EE, Jazbec S က, လူယာ eb, ရဟန်းတော် CS, Leibenluft အီး, et al ။ လူကြီးများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်အကျိုးအမြတ်လက်ခံရရှိခြင်းနှင့်ပျက်ကွက်မှတုံ့ပြန်မှုအတွက် Amygdala နှင့်နျူကလိယ accumbens ။ Neuroimage ။ 2005;25(4): 1279-1291 ။ [PubMed]
Ernst M က, ထင်းရူး DS, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်လှုံ့ဆော်အပြုအမူများ၏ neurobiology ၏ Hardin အမ် Triadic မော်ဒယ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ။ 2006;36(3): 299-312 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Figner B, Mackinlay RJ, Wilkening က F, Weber နဲ့အီးယူ။ အန္တရာယ်များရွေးချယ်မှုအတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေနှင့် deliberative ဖြစ်စဉ်များ: အကိုလံဘီယာကတ် Task ကိုယူအန္တရာယ်အတွက်အသက်ကွဲပြားခြားနားမှု။ စမ်းသပ်စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်: သင်ယူ, မှတ်ဉာဏ်နှင့်သိမှတ်ခံစားမှု။ 2009;35(3): 709-730 ။
Forbes မဂ္ဂဇင်း EE, Dahl RE ။ Pubertal ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်အပြုအမူ: လူမှုရေးနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးသဘောထားတွေ၏ဟျောမုနျး activation ။ ဦးနှောက်နှင့်အသိမှတ်ခံစားမှု။ 2010;72: 66-72 ။ [PubMed]
Friston KJ, Buechel ကို C, က Fink ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, မောရစ် J ကို, Rolls အီး, Dolan RJ ။ neuroimaging အတွက် Psychophysiological နှင့် modulatory interaction က။ Neuroimage ။ 1997;6: 218-229 ။ [PubMed]
သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Hare က TA, Davidson က M, Spicer J ကို, ဂလိုဗာ, G, Casey BJ ။ လူသားတွေအတွက်ဆုလာဘ်-based သင်ယူမှုအတွက် ventral frontostriatal circuitry ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2005;25(38): 8650-8656 ။ [PubMed]
သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Hare က TA, Parra အီး, Penn J ကို, Voss H ကို, ဂလိုဗာ, G, et al ။ orbitofrontal cortex မှဆွေမျိုးအဆိုပါ accumbens ၏အစောပိုင်းကဖှံ့ဖွိုးတိုးတမြီးကောင်ပေါက်အတွက်အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအပြုအမူအခြေခံလိမ့်မယ်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2006;26(25): 6885-6892 ။ [PubMed]
Geier CF, Terwilliger R ကို, Teslovich T က, Velanova K သည်, Luna ခနုဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက်။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2010 ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏ E-အရက်ဆိုင်။
Giedd ဖြစ်မှု, Blumenthal J ကို, Jeffries NO, Castellanos FX, လျူ H ကို, Zijdenbos တစ်ဦးက, et al ။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု: တစ် longitudinal MRI လေ့လာမှု။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 1999;2: 861-863 ။
Gitelman DR, ပဲန်နီ WD, Ashburner J ကို, Friston KJ ။ hemodynamic deconvolution ၏အရေးပါမှု: fMRI အတွက်ဒေသတွင်းနှင့် psychophysiologic interaction ကမော်ဒယ်။ Neuroimage ။ 2003;19(1): 200-207 ။ [PubMed]
ဂလိုဗာ GH, Thomason ME ။ BOLD fMRI အဘို့အလိမ်-In / ထွက်ပုံရိပ်တွေ၏တိုးတက်ပေါင်းစပ်။ Magn ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှု Med ။ 2004;51(4): 863-868 ။ [PubMed]
Gross AL, Ballif ခ။ မျက်နှာအမူအရာနှင့်အခြေအနေများမှကလေးများ၏ခံစားချက်ကိုကလေးနားလည်မှု။ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 1991;11: 368-398 ။
Haber SN ကင်မ် KS, Mailly P ကို, Calzavara R. ဆုကြေး-related cortical သွင်းအားစုမက်လုံးပေး-based သင်ယူမှုများအတွက်အလွှာပေး, အသင်းအဖွဲ့များ cortical ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူ interface တစ်ခုကိုမျောက်ဝံများအတွက်ကြီးမားတဲ့ striatal ဒေသသတ်မှတ်။ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2006;26(32): 8368-8376 ။ [PubMed]
Haber SN, Knutson ခအဆိုပါဆုလာဘ် circuity: မျောက်ခန္ဓာဗေဒနှင့်လူ့ပုံရိပ်ချိတ်ဆက်ခြင်း။ Neuropsychopharmacology ။ 2009;1: 1-23 ။
Hardin MG, ကထပ်လောင်း: D, Mueller SC, Dahl RE, ထင်းရူး DS, Ernst အမ် Inhibitory ထိန်းချုပ်မှုစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့်ကျန်းမာမြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာမက်လုံးပေးခြင်းနှင့်ဖွစျပှားထိခိုက်စေလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် modulated ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးသူငယ်စိတ်ပညာနှင့်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2009;50(12): 1550-1558 ။
ယုန်က TA, စပါး N ကို, Davidson MC, ဂလိုဗာ GH, Casey BJ ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုစည်းမျဉ်းထဲမှာ amygdala နှင့် striatal လှုပ်ရှားမှုပံ့ပိုးမှုများကိုသာ။ ဟားဗတ်။ 2005;57(6): 624-632 ။ [PubMed]
ယုန်က TA, စပါး N ကို, သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Voss Hu, ဂလိုဗာ GH, Casey BJ ။ တစ်ဦးစိတ်ပိုင်းသွားလာရင်း-nogo တာဝန်စဉ်အတွင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်စိတ်ခံစားမှု reactivity ကိုများနှင့်စည်းမျဉ်း၏ဇီဝအလွှာဟာ။ ဟားဗတ်။ 2008;63(10): 927-934 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Herba ကို C, Phillips ကအမ်မှတ်စာ: မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှငယ်စဉ်ကလေးဘဝထဲကနေမျက်နှာစကားရပ်အသိအမှတ်ပြုမှု၏ဖွံ့ဖြိုးရေး: အပြုအမူနှင့်အာရုံကြောအမြင်များ။ ကလေးစိတ်ပညာနှင့်စိတ်ရောဂါကုသမှုနှင့်မဟာမိတ်စည်းကမ်းများ၏ဂျာနယ်။ 2004;45(7): 1185-1198 ။
ဂျွန်စသည် T, Somerville LH အလက်ဇန္ဒား AL, Davidson RJ, Kalin နယူးဟမ်းရှား, Whalen PJ ။ မျိုးစုံစကင်အစည်းအဝေးများကျော်၌လည်းကြောက်မက်ဘွယ်သောမျက်နှာများမှ amygdala BOLD တုံ့ပြန်မှုတည်ငြိမ်ရေး။ Neuroimage ။ 2005;25: 1112-1123 ။ [PubMed]
Klingberg T က, Forssberg H ကို, Westerberg အိပ်ချ်တိုကျရိုကျနှင့် parietal cortex အတွက်ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစဉ်အတွင်းမှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်အလုပ်လုပ် visuospatial ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအခြေခံ။ သိမှုအာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်။ 2002;14(1): 1-10 ။ [PubMed]
Luna B, Padmanabhan A, O'Hearn K. မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မှတစ်ဆင့်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ fMRI ကဘာပြောခဲ့သနည်း။ ဦးနှောက်နှင့်အသိမှတ်ခံစားမှု။ 2010
Luna B, Sweeney ဂျေအေ။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဦးနှောက် function ကိုပေါ်ပေါက်ရေး: တုံ့ပြန်မှုတားစီး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ fMRI လေ့လာမှုများ။ သိပ္ပံ၏နယူးယောက်အကယ်ဒမီ၏ရာဇဝင်။ 2004;1021: 296-309 ။ [PubMed]
Luna B, Thulborn KR, Munoz DP, Merriam EP, Garver Ke, Minshew NJ, et al ။ ကျယ်ပြန့်ဖြန့်ဝေဦးနှောက် function ကို၏ရင့်ကျက်မှတ်ဉာဏ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ subserves ။ Neuroimage ။ 2001;13(5): 786-793 ။ [PubMed]
မာတင်, CA, ကယ်လီ TH, Rayens MK, Brogli BR, Brenzel တစ်ဦးက, စမစ် WJ, အိုမာ HA ။ Sensation ရှာ, အပျိုဖော်ဝင်နှင့်နီကိုတင်း, အရက်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင်ဆေးခြောက်သုံးစွဲခြင်း။ ကလေးသူငယ်၏အမေရိကန်အကယ်ဒမီနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်စိတ်ရောဂါကုသမှု၏ဂျာနယ်။ 2002;41(12): 1495-1502 ။
Miller က ek, Cohen ကို JD ။ prefrontal cortex function ကို၏အရေးပါသောသီအိုရီ။ Annu ဗြာ neuroscience ။ 2001;24: 167-202 ။ [PubMed]
မာဖီ K ကို Bodurka J ကို, Bandettini PA ဆိုပြီး။ ဘယ်လောက်ကြာ scan သလော ဆူညံသံအချိုးအစားနှင့်လိုအပ်သောစကင်ဖတ်စစ်ဆေးတဲ့ကြာချိန်မှ fMRI ယာယီ signal ကိုကြားဆက်ဆံရေး။ Neuroimage ။ 2007;34(2): 565-574 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
နယ်လ်ဆင် EE, Leibenluft အီး, လူယာ eb, ထင်းရူး DS ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏လူမှုရေး Re-orientation ကို: လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် psychopathology ရန်၎င်း၏စပ်လျဉ်းအပေါ်တစ်ဦးမှ neuroscience ရှုထောင့်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ။ 2005;35: 163-174 ။ [PubMed]
Pasupathy တစ်ဦးက, Miller က ek ။ အဆိုပါ prefrontal cortex နဲ့ striatum အတွက်သင်ယူမှု-ဆက်စပ်လှုပ်ရှားမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်သင်တန်းများ။ သဘာဝ။ 2005;433: 873-876 ။ [PubMed]
Poldrack RA, Prabhakaran V ကို, Seger, CA, Gabrieli JD ။ တစ်သိမြင်ကျွမ်းကျင်မှု၏ဝယ်ယူစဉ်အတွင်း Striatal activation ။ Neuropsychology ။ 1999;13: 564-574 ။ [PubMed]
Pontieri FE, Tanda, G, Orzi က F, အနျူကလိယ accumbens နှင့်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးသူတို့အားတူညီမှုအပေါ်နီကိုတင်း၏ Di Chiara G. အအကျိုးသက်ရောက်မှု။ သဘာဝ။ 1996;382: 255-257 ။ [PubMed]
Romeo RD, Sisk CL ။ အဆိုပါ amygdala အတွက် Pubertal နှင့်ရာသီအလိုက် plasticity ။ ဦးနှောက်သုတေသန။ 2001;889: 71-77 ။ [PubMed]
ရူဗျောဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ K ကို Smith က AB, Woolley J ကို, Nosarti ကို C, Heyman ငါတေလာအီး, et al ။ သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး၏အဖြစ်အပျက်-related တာဝန်များကိုစဉ်အတွင်းလူကြီးဖို့ကလေးဘဝထဲကနေ frontostriatal ဦးနှောက်ကို Activation ၏တိုးတက်ရေးပါတီတိုး။ လူ့ဦးနှောက်ပုံထုတ်ခြင်း။ 2006;27: 973-993 ။ [PubMed]
Schultz W က, Tremblay L ကို, Hollerman JR ။ မျောက် orbitofrontal cortex နဲ့ Basal ganglia အတွက်အပြောင်းအလဲနဲ့ဆုချ။ Cereb Cortex ။ 2000;10(3): 272-284 ။ [PubMed]
Sisk CL, Foster DL ။ အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏အာရုံကြောအခြေခံ။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2004;7: 1040-1047 ။
Somerville LH, Casey BJ ။ သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးစနစ်များဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ neurobiology ။ Neurobiology အတွက်လက်ရှိထင်မြင်ချက်။ 2010;20: 1-6 ။
လှံကို LP ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်နှင့်အသက်အရွယ်-related အပြုအမူသရုပ်။ neuroscience နှင့် Biobehavioral ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ။ 2000;24(4): 417-463 ။ [PubMed]
Spicer J ကို, သွပ်ရည်စိမ်တစ်ဦးက, Hare က TA, Voss H ကို, ဂလိုဗာ, G, အနျူကလိယ accumbens ၏ကာဇီခထိခိုက်လွယ်မှုဆုလာဘ်မြျှောချိုးဖောက်မှုများရန်။ Neuroimage ။ 2007;34(1): 455-461 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်တာ Steinberg အယ်လ်အန္တရာယ်: အဘယျသို့အပြောင်းအလဲ, ဘာကွောငျ့လဲ? အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2004;1021: 51-58 ။ [PubMed]
Talairach J ကို, Tournoux P. ခုနှစ်တွင်: လူ့ဦးနှောက်၏ co-ပြို stereotaxic Atlas ။ Rayport M က, ဘာသာပြန်ဆိုသူ။ Thieme ဆေးဘက်ဆိုင်ရာထုတ်ဝေ; နယူးယောက်, NY: 1988 ။
သောမတ်စ် KM, Drevets WC, Whalen PJ, Eccard CH, Dahl RE, ရိုင်ယန် ND, et al ။ ကလေးများနှင့်လူကြီးများအတွက်မျက်နှာအသုံးအနှုန်းတွေမှ Amygdala တုံ့ပြန်မှု။ ဟားဗတ်။ 2001;49(309-316)
စပါး N ကို, Tanaka J ကို, လီယွန်, AC, McCarry T က, သူနာပြု M က, Hare က TA, et al ။ မကျွမ်းကျင်သူတွေပဲသုတေသနသင်တန်းသားများအနေဖြင့်တရားစီရင်ပိုင်: မျက်နှာအသုံးအနှုန်းတွေ၏ NimStim အစုံ။ စိတ်ရောဂါကုသမှုသုတေသန။ 2009;168(3): 242-249 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Vaidya CJ, Austin, G, Kirkorian, G, Ridlehuber HW, Desmond je, ဂလိုဗာ GH, et al ။ တစ်ဦး functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုလေ့လာမှု: အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါအတွက် methylphenidate ၏ရွေးချယ်ဆိုးကျိုးများ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1998;95(24): 14494-14499 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဗန် Leijenhorst L ကို, Zanolie K ကိုဗန် Meel CS, Westenberg pm တွင်, Rombouts လုပ် SA, Crone EA ၏။ အဘယ်အရာဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလှုံ့ဆျော? မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကိုဖြတ်ပြီးဆုလာဘ် sensitivity ကိုဖြန်ဖြေဦးနှောက်ဒေသများ။ Cereb Cortex ။ 2009
Velanova K သည်, ဝီ ME, anterior cingulate နှင့် frontoparietal စုဆောင်းမှုအတွက် Luna ခရင့်ကျက်သောအပြောင်းအလဲအမှားအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုများ devleopment ထောက်ခံပါတယ်။ ဦးနှောက် Cortex ။ 2008;18: 2505-2522 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Wickens TD ။ မူလတန်း signal ကိုထောက်လှမ်းသီအိုရီ။ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; နယူးယောက်, NY: 2002 ။
ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု RA ။ Dopamine, သင်ယူမှုနှင့်လှုံ့ဆျောမှု။ သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ Reviews ။ 2004;5: 483-494 ။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း Yurgelun-Todd ဃစိတ်ခံစားမှုနှင့်သိမြင်မှုအပြောင်းအလဲများကို။ Neurobiology အတွက်လက်ရှိထင်မြင်ချက်။ 2007;17: 251-257 ။ [PubMed]